Spotlight & Most popular Burma/Myanmar Related News (Sept 2011) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » Spotlight & Most popular Burma/Myanmar Related News (Sept 2011)
Spotlight & Most popular Burma/Myanmar Related News (Sept 2011)
Posted by kai on Sep 2, 2011 in Myanma News, News | 46 comments
BURMA RELATED NEWS – SEPTEMBER 02, 2011
Asian Correspondent – Amid armed conflict in Kachin state, China speeding up the dam in Burma
AP – WikiLeaks reveals all, media groups criticize move
CNN – Index: Which countries are perceived to be the most corrupt?
The Diplomat – Burma’s Leadership Tries Plan B
The Age – Dictators versus dollars
The Nation – Music to calm the savage diplomatic beast? US band to visit Burma
Whidbey News Times – Burmese youth drowns at Cranberry Lake
AsiaNews.it – Russia’s Gazprom moving into Myanmar
Malaysia Today – The sad saga of Chin refugees in Malaysia
The Malaysian Insider – Refugees timourous from police shakedowns, US cable claims
Your Oil and Gas News (press release) – Myanmar Oil Markets 2011
New Internationalist – Stripping Burma bare
The Huffington Post – ASEAN, the EU and the End of Westphalia
The Irrawaddy – Bullies Across Borders?
The Irrawaddy – What Is the EU Waiting For In Burma?
The Irrawaddy – ‘Save The Irrawaddy’ Campaign Gains Momentum
Mizzima News – Burmese Home Ministry bans talks on peace
Mizzima News – Fever spreads through children living in Karenni refugee camp
Mizzima News – More working journalists named to Burmese National Press Award committee
DVB News – Parliament approves ‘peace committee’
DVB News – No political forum planned: advisor
DVB News – Crimes against the Karen must end
By Zin Linn Sep 02, 2011 8:17PM UTC
Today state-owned New Light of Myanmar newspaper accused KIO/KIA of forcibly recruiting villagers in Dawphonyan Sub-Township into their armed forces.It said that KIO/KIA forced local people to join them, and otherwise they are not allowed to live in the villages. The ethnic armed group proclaims that one man from each household in lower Tarsai Village, upper Tarsai Village, Teinmakyaing Village and Mongma Village in Dawphonyan Sub-Township must join KIO/KIA.
Such act of KIO/KIA shows that they proveatotal disregard for the wishes of the local people wishing for peace and undermined the stability of Kachin State, and security and socio-economy of the rural people, the government media said.
However, Salang Kaba Lar Nan, Joint General Secretary-2 of the KIO, dismissed the government newspaper’s accusation as baseless since those villages are under the government’s administration. Moreover, members of the KIO/KIA join up the group at their will, he said.
Meanwhile, China is speeding up the construction of the Irrawaddy dam although the armed conflict still going on in Kachin State, quoting an urgent August-31-dated statement released by the Kachin Development Networking Group (KDNG), the Kachin News Group said.
The Myitsone dam is being constructed by workers of the state-owned China Power Investment Corporation (CPI) and the Burma-Asia World Company, plus 700 additional construction workers from the Chinese state-owned Sino-hydro Corporation, Ms. Ah Nan, spokesperson for the KDNG said.
In October 2009, the Thailand-based Kachin Development Networking Group (KDNG) publishedareport – “Resisting the flood” – highlighting the implementation of the Myitsone dam project on the Irrawaddy River. The report demanded to stop the project sponsored by the China Power Investment Corporation (CPI), the main investor and contractor.
The dam project creates unwelcome impacts like social, environmental, livelihood, cultural and security problems for tens of thousands of people around the dam location and downstream of the dam. The report states that more than 15,000 people in 60 villages around the dam sites are being forcibly relocated without proper resettlement plans being drawn up by the Burmese military regime. They lost their means of livelihood such as farming, fishing and collection of non-timber forest products.
Besides, over 150,000 people in Kachin’s capital Myitkyina, 27 miles downstream of the dam, will have to live under the constant threat of floods from the dam if there is an earthquake. The dam is less than 100 kilometers fromamajor fault line in an earthquake-prone area, warned the KDNG report.
More Chinese construction machinery and materials are being transported to the Myitsone Dam site by 12-wheel trucks on the Myitkyina-Kambaiti Road, referring local eyewitnesses of border town Kambaiti, KNG reported.
Afteranew military conflict started between the Burmese Army and the KIA in June, in Kachin State, the KIA post along the Myitkyina-Kambaiti route banned trucks loaded with construction materials and equipment, according to truck drivers on that road. The KIA also damaged the key bridges on the road using mines. Part of the Stilwell Road (also called Ledo) was reconstructed in 2006, atacost of 97 million Yuan (US$15.2) by Chinese companies from Yunnan province.
The Kachin Independence Organization (KIO), the political wing of the KIA, sent an open letter to Chinese President, Hu Jintao, in March, urgingahalt to the Irrawaddy Myitson Dam construction because it will lead civil war in the country.
According to the KDNG statement, the Chinese communist government has refused the KIO request.
With the help of the KDNG, Kachin ethnic people around the world have protested by sending an appeal letter with many signatures via the Chinese Embassies in five cities such as Bangkok, London, New Delhi, Singapore and Wellington addressed to Premier Wen Jiabao. They madeafervent appeal in March 2010 to stop the Myitsone Hydropower project in Kachin State.
The 500 foot dam has been under construction at the confluence (Myitsone) of the Mali Hka River and N’Mai Hka River, 27 miles north of the Kachin capital, Myitkyina, beginning in December, 2009, and it will cost 3.6 billion dollars.
Most of the 6000 MW of electricity produced will be sold to China.
Inastatement issued on 11 August, Burma’s Nobel laureate Aung San Suu Kyi said the dam endangers the flow of the Irrawaddy River, which she described as “the most significant geographical feature of the country.”
Raphael G. Satter, Associated Press, On Friday September 2, 2011, 11:00 am EDT
LONDON (AP) — WikiLeaks disclosed its entire archive of U.S. State Department cables Friday, much if not all of it uncensored —amove that drew stinging condemnation from major newspapers which in the past collaborated with the anti-secrecy group’s efforts to expose corruption and double-dealing.Many media outlets, including The Associated Press, previously had access to all or part of the uncensored tome. But WikiLeaks’ decision to post the 251,287 cables on its website makes potentially sensitive diplomatic sources available to anyone, anywhere at the stroke ofakey. American officials have warned that the disclosures could jeopardize vulnerable people such as opposition figures or human rights campaigners.
It’sarelatively new tactic for the group, which has in the past relied on mainstream partners to organize and promote its spectacular leaks of classified information — including U.S. intelligence documents detailing the wars in Iraq and Afghanistan. Whether such collaborations will continue is unclear.
September 2, 2011 7:54 a.m. EDT
Country/territory Score Surveys used Standard deviation
Somalia 1.130.3
Afghanistan 1.440.3
Myanmar 1.430.5
Iraq 1.530.4
Sudan 1.650.4
Turkmenistan 1.630.2
Uzbekistan 1.660.2
Chad 1.760.2
Burundi 1.860.3
Angola 1.960.2Editor’s Note: Each Friday, CNN will examine statistics or world rankings to show how countries and territories compare with one another. Who’s the best? Who’s the worst? And where does the United States fit in? You’ll find those answers in our Country Comparisons series.
(CNN) — Somalia, Myanmar and Afghanistan have the lowest scores on Transparency International’s Corruption Perceptions Index, which measures how people in 178 countries and territories view corruption in their public sectors.
Onascale of 0-10, with 10 being “very clean” and0being “highly corrupt,” all three countries score below 1.5. Somalia is the lowest at 1.1, while Myanmar and Afghanistan are tied for second at 1.4.
The United States, withascore of 7.1, is among the countries viewed as least corrupt. It’s tied for 22nd overall with Belgium. But while the U.S. is well ahead of neighbor Mexico (3.1), it seems to have some work to do to catch Canada (8.9).
The latest scores were drawn from 13 surveys and assessments published between January 2009 and September 2010 by “independent and reputable institutions,” according to Transparency International. It defines corruption as the abuse of entrusted power for private gain.
Transparency International isanongovernmental organization headquartered in Berlin. It acknowledges that corruption, by nature, is often hidden and therefore difficult to quantify, but it says it has found people’s perceptions to beareliable estimate over the long term.
Egypt (3.1) and Tunisia (4.3) scored better, but not by much. Again, it’s important to point out that these surveys were conducted well before these two countries’ longtime leaders were ousted.
Desperate for international legitimacy, Burma’s new president has been keen to give the impression of change in the country. ASEAN shouldn’t be fooled.In May, I wrote in The Diplomat how Burma’s new dictator had experiencedatough start to his presidency. Rigged elections held last November, and then the release of Aung San Suu Kyi, were part ofaplan by the dictatorship to gain acceptance by the international community. When Burma’s new parliament opened and Thein Sein madeagrand speech promising change, he was undoubtedly hoping that his government would finally gain the legitimacy it craves.
But things didn’t go according to planned. First, the United States, the European Union, and Canada refused to relax economic sanctions. Then came the blow that must have hurt most of all: the Association for Southeast Asian Nations delayedadecision on whether Burma could assume chairmanship of the organisation when its turn comes in 2014.
There’sasoftening stance on visitors to Burma since the release of the democracy leader, writes Steve Meacham.Should you go to Burma? Is it unethical for tourists to spend money visitingacountry run byamilitary dictatorship with an appalling human rights record?
Or is the greater good served not by boycotts or isolation but the constant breeze of outsiders inevitably bringing change over time?
That’s the dilemma travellers have faced since the 1990 elections, won by the National League for Democracy, but overturned by the military junta – resulting in the house arrest of the league’s figurehead, Aung San Suu Kyi.
With her long-delayed release on November 13 last year, the Nobel Peace Prize winner relaxed her stance on foreign tourism. While Suu Kyi hasn’t embraced it, she seemed to endorse the arrival of overseas visitors provided they did not swell the coffers of the ruling generals.
As the campaign coordinator for the Sydney-based protest group Campaign Burma Australia, Zetty Brake, puts it: “Last year the NLD’s position shifted from ‘Don’t visit Burma’ to ‘It’s OK for small independent groups to come provided they engage with the local people’.”
Peregrine Adventures and budget twin Gecko’s Adventures both ran tours to Burma throughout the 15-year boycott. The Asia destination manager for Peregrine, Stuart Lyall, says Suu Kyi’s change of heart has led toa25 per cent increase in international tourism to Burma in the past year.
Peregrine and Gecko’s have always worked with the same husband-and-wife tour company in Rangoon, Lyall says. Group size is kept to about 15 and government- aligned businesses are avoided, although there’s no alternative to the government-owned railway. “We only use privately-owned hotels and transport, including airlines,” Lyall says. “But we can’t avoid the5per cent VAT tax or the2per cent foreign currency tax.”
Sue Badyari is the chief executive of World Expeditions, the other major Australian operator currently taking tourists into Burma (at least one other Australian operator is expected to renew tours soon). She says Suu Kyi’s announcement in November “wasafundamental turning point”. But World Expeditions has always used “an excellent local partner” who “ensures the flow of funds to [Burma] would land in the right hands”.
“We are not saying that tourism will change things for [the people of Burma] overnight,” she says. “But, if operators structure their contracts inaway that delivers income streams for private enterprise, which provides employment and therefore benefits thousands of people and families, then we view this asapowerful and positive vehicle for change.”
The Department of Foreign Affairs and Trade website, Smart Traveller, advises Australians to exercise caution and be aware of the political situation. Lonely Planet hasadownloadable chapter on the ethics of travelling to Burma.
Campaign Burma Australia now accepts the NLD’s partial embrace of tourism. So what does it recommend to Australian travellers? “Travel as an independent or in small groups,” Brake says.
Rangoon – A US band is to makearare appearance in Burma this month in the latest sign ofapossible diplomatic thaw between the military-dominated country and the West, officials said Friday.Earth String is to be in Burma September 21-25,aUS embassy official said without providing details.
The band’s visit, sponsored by the embassy, was seen as the latest sign of slight improvements in Burma’s relations with Western democracies after its November general election, the first in 20 years.
“I think all relations usually start with the cultural sector,” one Asian diplomat in Rangoon said. “This isapositive sign for American-Myanmar [Burmese] relations.”
“I hope it isapositive sign for American-Myanmar relations because we haven’t seen these kinds of musical bands here for sometime,” said Nay Zin Latt,apolitical adviser to the new government.
An 18-year-old refugee from Burma drowned while swimming ataDeception Pass State Park lake Saturday afternoon, according to the Island County Coroner’s Office.Sang Cung Hnin was at Cranberry Lake withagroup of friends fromaKent church group when the tragedy occurred. Hnin and his family escaped from Burma, which is officially known as the military-dominated Republic of the Union of Myanmar, and had been living in Malaysia prior to moving to Kent just two weeks ago.
RUSSIA – MYANMAR
Officials from the Russian energy giant visit Naypyidaw. The stat-run company wants new partners in the East to offset its excessive reliance on the European market.
Moscow (AsiaNews) – In order to diversify its business and reduce its excessive reliance on an increasingly hostile European market, Russian energy giant Gazprom plans to conduct geological surveys in Myanmar, the Democratic Voice of Burma website reported, citing the International Oil Daily. For this purpose, representatives of the Russian state-run company went to the Myanmar capital of Naypyidaw for talks with local authorities.Russia has the largest proven reserves of gas in the world, making Gazprom the largest extractor of natural gas in the world as well as the largest Russian company.
Its profits for the first quarter of this year reachedarecord 468 billion rubles (US$ 16.3 billion), 44 per cent higher than the same period last year, far more than experts had forecast.
Greater sales because of the interruption of Libyan supplies and rising prices domestically and in the European Union have helped the Russian company. However, only Europeans can buy Russian oil and gas because almost every Russian pipeline flows towards Europe.
In view of the European Commission’s desire to move towards greater energy independence from Moscow, Russia’s monopolistic giant is seeking new partners among individual companies that have long-term contracts (like Germany’s RWE) as well as new markets in the East, betting on China’s growing needs, which should outstrip Europe’s by 2030. At present, Beijing buys gas from its Central Asian neighbours as well as Myanmar.
The officials who visited Naypyidaw were from Gazprom’s international up stream branch, Gazprom EP International, which is registered in the Netherlands, an EU member state that is party to EU sanctions on Myanmar.
The Myanmar government is equally interested in working with the Russians because of the expertise the company can offer in terms of equipment, storage facilities, pipelines and knowhow. The Russian company can in fact conduct geological surveys and exploration that local companies cannot do.
Friday, 02 September 2011 Super Admin
A leaked 2006 US diplomatic cable tells about how the police extorted money from Burmese Chin refugees in exchange for their freedom.(Free Malaysia Today) – A leaked US diplomatic cable from 2006 has revealed the plight of the Burmese Chin refugees stranded in Malaysia and the urgency sought by the US diplomats for Washington to “settle large numbers of these refugees as quickly and smoothly as possible”.
“Institutional funding is needed to provide basic medical treatment and English language training for both children and working adults.
“Given our pending resettlement of thousands of Chin refugees from Malaysia, modest investments in immunizations, medical care and English language training in Malaysia’s relatively low cost environment would yield substantial benefits for both the Chin refugees and the United States,” said the US embassy cable dated Nov 20, 2006, to the State Department in Washington DC.
The US diplomats also stated that they would work with the relevant US government agencies and the UN’s refugee agency – the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – to resettle the Chin refugees away from Malaysia quickly.
The additional funding sought by the US diplomats were also to be used for basic medical and education needs of the Chins and other refugee communities in Malaysia, stated the cable.
Camps close to Putrajaya
The cable wasaresult ofavisit by the US embassy’s political officer to two jungle camps housing about 200 Chin refugees near the Malaysian administrative capital in Putrajaya on Nov 15, 2006.
The cable noted the physical characteristics of the camps, which were made out of shelters using wooden poles, plywood for elevated sleeping platforms, and fluttering sheets of plastic for roofing and walls.
The cable also pointed out that “a sense of devotion to Christianity pervaded each camp”.
“Each camp containedachurch structure (the largest and most well-maintained structure in each camp) and all of the approximately 100 square foot dwellings viewed by political officer prominently displayed crosses or pictures of Jesus.”
The refugees at the two camps have not been visited by UNHCR representatives during at least the past two years, said the cable quoting the refugees, and as many as seven camps containing up to 1,000 Chin refugees were erected within five miles of the Prime Minister’s office in Putrajaya in 2006.
The interests of the Chin refugees in Malaysia were taken care by the Alliance of Chin Refugees (ACR) and the Chin Refugee Committee (CRC). The cable stated that CRC claimed to have about 17,400 members in Malaysia.
The Chin refugees had also informed the visiting US diplomat of their fear of police extortions and raids.
The diplomat stated that the police were aware of the presence of the camps.
KUALA LUMPUR, Sept2– As many as 1,000 unregistered Myanmar Chin refugees live in fear of police harassment in primitive jungle camps within 8km of the Prime Minister’s Office in Putrajaya, according to US diplomatic cables leaked today.The camps, located on the fringe of palm oil plantations, were set up as far back as four years ago and some are known to the police who have carried out regular raids, threatening the unregistered refugees with arrests and deportation while allegedly extorting money in exchange for letting them go.
According to the leaked cable released on Malaysia Today, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) have been unhelpful in registering the Myanmar Chins, deeming them to be “on-emergency” cases and leaving them more vulnerable to exploitation.
The UNHCR registration provides the only form of protection to refugees, including children. Without it, they are unable to have access to legal medical care and education and risk being shipped home if caught by the authorities.
While Malaysian law forbids refugees from working in the country, many at the Putrajaya camps were employed illegally as day labourers in the palm oil plantations for RM25aday, but were often denied even that pay for one reason or another.
The cable noted that as of July 1, 2006 only 7,805 Chin had been UNHCR-registered as “persons of concern” in Malaysia,amoderate increase from 6,566 at year-end 2005.
However, unofficial US sources in the cable put the number of Chin refugees in Malaysia much higher, at about 20,000.
“Working on the plantations for little money and uncertain payment of wages, receiving access to medical care only in some emergency situations, and facing arrest and deportation if captured by Malaysian authorities, unregistered Chin refugees living in the jungle remain among the most vulnerable and exploited refugees in Malaysia,” the cable said.
It added that one Chin told its translator: “We would rather die here than go back to Burma”; it added that the refugees “remained unaware that the United States planned to resettle thousands of Chin refugees from Malaysia”.
The lives of refugees in Malaysia have come under the spotlight since Putrajaya admitted toahuman trafficking problem and signedadeal with Canberra to exchange refugees.
The first boatload of refugees held on Christmas Island were set to be shipped to Malaysia as early as next week, but the deal, known popular in Australia as the “Malaysian Solution”, has crumbled after an Australian High Court deemed it illegal two days ago.
Research and Markets has announced the addition of GlobalData ‘s new report “Myanmar Oil Markets, 2011” to their offering.This profile is the essential source for top-level energy industry data and information. The report provides an overview of each of the key sub-segments of the energy industry in Myanmar.
It details the market structure, regulatory environment, infrastructure and provides historical and forecast statistics relating to the supply/demand balance for each of the key sub-segments. It also provides information relating to the crude oil assets (oil fields, refineries and pipelines) in Myanmar.
The report compares the investment environment in Myanmar with other countries in the region. The profiles of the major companies operating in the crude oil sector in Myanmar together with the latest news and deals are also included in the report.
Historical and forecast data and information for all the major oil fields, refineries, pipelines and storage terminals in Myanmar for the period 2000-2015.
Operator and equity details for major crude oil assets in Myanmar.
Key information relating to market regulations, key energy assets and the key companies operating in the Myanmar’s energy industry.
Information on the top companies in the Myanmar including business description, strategic analysis, and financial information.
Published on September 2, 2011 by Francis Wade
With its lax environmental laws, Burma has becomeabattleground for neighbouring countries keen to get their hands on the country’s abundant natural resources. Francis Wade reports.Among the tens of thousands to have fled escalating conflict in Burma’s border regions this year were some 50 labourers working for Ital-Thai, the Bangkok-based construction giant behind what is set to become Southeast Asia’s largest industrial complex. The men had been toiling onahighway connecting the Thai town of Kanchanaburi to Tavoy in southern Burma, whose strategically vital location on the western side of the isthmus shared by both countries has set the mouths of Southeast Asian governments watering.
A major byproduct of this has been the creation of hundreds of thousands of refugees, the majority of whom either flee from their homes into the surrounding countryside, or cross the border into China and Thailand. At least halfamillion internally displaced persons (IDPs) are estimated to be in eastern Burma alone, while nearly 150,000 populate the nine camps across the border in Thailand. China has also seen two major influxes in the past two years resulting directly from government efforts to eliminate rebels in Burma’s north.
Posted: 9/1/11 01:49 PM ET
BALI — Set uponablue background, the flag of the Association of Southeast Asian Nations depicts 10 yellow rice paddy stalks drawn in the middle ofared circle withawhite border. The interesting thing about the banner is not merely that it represents the main colors of all ten ASEAN member state flags: Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Malaysia, Cambodia, Laos, Myanmar and the Philippines. It is that 44 years to the day after ASEAN was founded, on August 8th — inadevelopment that received little attention outside Asia — the flag was hoisted for the first time alongside the banners of all member states at hundreds of embassies and diplomatic missions around the world.Kicking offayear dedicated to the theme “Unity in Diversity”, ASEAN’s stirring declaration of interdependence is just the latest example of what ASEAN Secretary-General Surin Pitsuwan describes to me as “our drive to raise our own bargaining power fromalarger base.” Atatime when the European Union’s struggle to rescue free-spending members Portugal, Ireland, Italy, Spain and Greece threatens to bring the whole continent tumbling down, ASEAN is rushing headlong to createasingle economic community by 2015.
But there is more at stake here than simply the joint success or failure of 10 Asian nations, whose 600 million people representacombined gross domestic product of $1.7 trillion — making it the sixth-largest economy in the world. ASEAN’s move to integration representsadifferent model of regional cooperation from the EU — less rooted in democracy, more tolerant of human rights violations, and more committed to sovereignty — that may goalong way toward defining how other regions evolve in the 21st Century.
In short, ASEAN “is making the case foranew kind of regionalism,” writes David Carson, the first resident U.S. Ambassador to ASEAN.
The 20th Century chipped away at the Westphalian idea. The creation of the United Nations and its Universal Declaration of Human Rights in 1948 represented the first global expression of rights fundamental to all human beings, challenging the Westphalian concept of sovereignty. For halfacentury, it was applied delicately, often through sanctions, in places like South Africa. It wasn’t until the 1990s when the international community intervened directly on behalf of humanitarian principle in Haiti and Kosovo —athread that runs through NATO’s intervention in Libya today.
Unlike the EU, the ASEAN vision doesn’t yet includeaunified currency, joint visas, or the fully free flow of labor. While ASEAN has reportedly implemented 75 percent of the blueprint it passed in 2008 to createaregional trade bloc, unlike the EU, it also remains committed toaprincipal of nonintervention in the affairs of members, known as the “ASEAN Way.” While the EU pulls out its collective hair trying to restructure an intransigent Greece, ASEAN still takesahands-off approach to member state Myanmar, whose brutal authoritarianism — despite recent elections — remainsadrag on ASEAN’s global image.
Yet, while Western observers condemn ASEAN over Myanmar and argue thatawobblier version of the EU will never work because it lacks central authority to enforce common rules, ASEAN supporters say sarcastically to me, “the U.S. is one to talk.”
It is no accident that ASEAN members have been focused on increasing trade with one other (up 31 percent in 2010), with neighboring China (up 25 percent in the first half of 2011) and with other Asian countries. As Indonesian Vice President Boediono said atarecent ASEAN meeting, “the U.S. and Europe could no longer be the main engines of growth for the world economy.”
The danger is not simply that Western investors fall behind in one of the world’s fastest-growing regions. The danger is that as other regions consider similar integration — imagineaSouth Asian confederation of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and the Maldives orafuture bloc in the Middle East.
In November, President Barack Obama is scheduled to attend the East Asian Summit in Bali. In his remarks, President Obama should take responsibility for America’s debt crisis and promise to beabetter partner for Asia, articulate progressive benchmarks ASEAN could help Myanmar achieve by 2015 and link passage ofalong-desired U.S.-ASEAN free trade agreement to those benchmarks being met.
It may not forestall the end of Westphalia- – but it could help extend Western leadership into the 21st Century.
By DAVID I. STEINBERG Thursday, September 1, 2011
The new, still fragile reform activities of the recently installed government in Burma have excited an outburst of vituperation from across international frontiers. As internal positive change is something external analysts have long sought, why is this so?Military regimes inherently bully—orders are given and are expected to be obeyed. Orthodoxy is required and diverse views are eschewed. Line up and obey. So bullies inside Burma areadistressful but expected outcome of the nature of that military- dominated government. The deeply flawed elections were, inasense, the outcome of such bullying.
But outside Burma? Developments within the country by the new government, with its probes toward positive change, have prompted an outburst of advocacy of heightened sanctions and renewed pressures foraUN Commission of Inquiry into human rights abuses at the very time when there is at least the possibility of reforms within the new “disciplined-flourishing democracy”. Even the possibility of positive change, still very much in process, has promptedabullying type of orthodoxy from outside Burma by members of organizations devoted to liberty, democracy and human rights. This is quite disturbing.
Throughout the long rule of the military since 1988, voices in opposition abroad have often countered nuanced consideration of the problems of Burma with cries, reminiscent of President George W Bush, that if you are not with us you are against us. The new tone, with its more frenetic stridency, seems borne out of the fear that the internal changes at least advocated by the head of state may indeed have some positive results, thus perhaps prolonging the life of the new administration and making it more acceptable to the Western world, and threatening the sanctions regimen that had been serially imposed on Burma and its rulers. In effect, this new approach to internal change may postpone or prevent the “Arab Spring” from reaching Burma.
These attacks have become personalized against some individuals who have studied that country and who have advocated the well-being of the diverse Burmese peoples. Democracy requires diversity of views and intelligent debate over alternatives, none of which may have simple answers. Policies based on dichotomies rarely are successful. The goals of those new bullies on the policy block are indeed admirable—human rights and improved freedoms and lives—and ones that can be widely shared and with which most of us would identify. Yet their tactics undercut the very goals they seek to reach.
It isasad, bordering tragic, condition that those of us physically, but not emotionally, removed from the Burma scene do not seem to be able to negotiate with amicable, respectful, and dignified personal relations the necessary and desirable policy differences among us that are reflective of the democracy we would like to see in that country. Dissent is essential, but so is amity.
For years, some observers of the Burmese scene have said that some of the incessantly articulated goals of the military government—national unity, sovereignty, better health, education, agriculture, etc.—are ones that could conceptually prompt widespread approval, but the means by which those goals have been approached, the tactics used to attempt to enforce them on the people, subvert the very aims toward which they purportedly work. In other words, one cannot get there from here on that route.
But what about this new stridency? Can one get to democracy, however defined in some non-adjectivally modified form, in this manner? It would seem highly unlikely. One does not question the motivation of those organizations advocating liberalization and change in Burma, nor the intent of their members, but one must question some ill-advised temperamental actions because—as across the frontier—you cannot get there from here.
David I. Steinberg is Distinguished Professor of Asian Studies, School of Foreign Service, Georgetown University. His latest volume is“Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know” (Oxford).
By BENJAMIN ZAWACKI Friday, September 2, 2011
It is time the EU work to establishaUN-led Commission of Inquiry into crimes against humanity and other crimes under international law in Burma.Four years ago this month, the people of Burma rose up in what became known as the “Saffron Revolution,” named after the Buddhist monks who eventually led the demonstrations. While the world initially condemned the security forces’ violent crackdown that followed, several months later the Burmese authorities managed to deflect international criticism by announcing it would hold national elections and formacivilian government.
The international community, including the European Union (EU), has been distracted ever since, despite an abundance of information that Burma’s government has continued to violate human rights onamassive scale. “Wait and see”—what the government will do before the elections, how the elections will be conducted, whether the new government will make any changes—has been the prevailing and irresponsible approach.
Meanwhile, the human rights situation in Burma has gone from bad to worse, with no justice for the victims. By the time the election announcement was made, the number of political prisoners in Burma had nearly doubled from its pre-Saffron Revolution number to over 2,100—where it remains today. Several months afterwards, the government denied, obstructed and/or confiscated international aid in the wake of Cyclone Nargis, turning the humanitarian disaster intoahuman rights crisis. Andayear later, authorities arrested, tried, and unlawfully extended the house arrest of opposition leader Daw Aung San Suu Kyi.
Among the situations calling out loudest for justice and accountability is Burma’s ethnic minority regions. Ten months before the November 2010 elections, Amnesty International releasedareport on the repression of ethnic minority political activists in Burma, which showed that optimism in relation to the polls was being contradicted in the ethnic minority areas.
It followedamid-2008 publication, Crimes against humanity in eastern Burma, whose relevance has only increased since then. The report focused on the Burmese army’s human rights violations against ethnic minority Karen civilians onawidespread and systematic basis, which amounted to crimes against humanity. Violations included extrajudicial executions, torture, arbitrary detention, forced labor, confiscation of land and food and forced displacement of the civilian population onalarge scale, starting in late 2005.
While this was the first time Amnesty had characterized such violations as crimes against humanity, the report’s findings were consistent with our research on the country for two decades. The testimonies, collected in several countries since 1987, documented the very same crimes against civilians. They were told to us not only by the Karen, but by many other ethnic minorities as well, including the Rohingya, the Karenni, the Shan and the Mon.
Likewise, accounts since mid-2008, especially since the day of Burma’s national elections last November, when hostilities were accelerated or renewed between the Burmese army
and armed groups fighting on behalf of several ethnic minorities, recall our report’s findings: serious human rights violations—some of which may amount to crimes against humanity and/or war crimes—against ethnic minority Karen, Kachin, and Shan civilians.
These include recent accounts of the army using prison convicts as porters in the fighting in Kayin (Karen) State, forcing them to act as human shields and mine-sweepers and of rape and other sexual violence, primarily in Shan State. Reliable reports indicate that the number of displaced persons there has reached 30,000, while in or near Kachin State 20,000 internally displaced persons were reported at the end of July.
We have waited for years, even decades, and seen quite enough: these violations call for accountability. However, Article 445 of Burma’s 2008 Constitution—which codifies immunity from prosecution for officials for past violations—indicates that without international action, this is most unlikely.
In October 2011, the UN special rapporteur will be presentingareport to the UN General Assembly, which will likely adoptaresolution on Burma. The EU will again lead in the drafting of this resolution.
In each of his reports or statements to the UN Human Rights Council and the General Assembly, the special rapporteur has called for greater accountability for grave international crimes in Burma or expressly recommended that the UN establishaCommission of Inquiry into such crimes.
While the question remains as to whether suchaCommission would have access to Burma,asimilar 1997 Commission by the International Labour Organization compensated for its denial of access partly through expert testimony, which Amnesty among others provided. Two years later, Burma passedalaw prohibiting forced labor. Accountability must begin somewhere.
Amnesty International welcomes the fact that 12 of the 16 nations that have publicly stated their support foraCommission of Inquiry in Burma are EU members, but regrets that neither the EU asabloc nor several of its influential members—including Germany, Italy, Spain and Sweden—have not done so.
After more than three years of “wait and see,” it is time the EU and its member states translate their concern about Burma’s human rights situation into public support for the establishment ofaUN-led Commission of Inquiry into crimes against humanity and other crimes under international law in Burma.
Benjamin Zawacki is Amnesty International’s Burma researcher andamember of the US Council on Foreign Relations.
A petition signed by nearly 1,600 influential Burmese persons, including politicians, journalists, writers, artists and film directors, has been sent to President Thein Sein on Thursday withacampaign message titled “From Those who Wish the Irrawaddy to Flow Forever.”The signatories included: Win Tin,aprominent member of the opposition National League for Democracy; veteran journalists Sein Win and Maung Wun Tha; Kyaw Thu, the founder of the Free Funeral Services Society; writer Than Myint Aung; social activist Aung Thin; the acclaimed writer Zaw Zaw Aung; and film director Cho Tu Zal.
The campaign was organized by Myat Thu,aprominent member of the 88 Generation Students group.
Speaking to The Irrawaddy on Thursday, Myat Thu said, “Along with the petition we sentaletter that outlined our anxieties.”
The Irrawaddy River is considered the main artery of Burma and million sof people depend on it for their livelihoods. It has its source in Kachin State in northern Burma at the confluence of the N’mai and Mali rivers, and flows 2,170 km (1,348 mi) through many of the country’s main cities, including Myitkyina, Bhamo, Mandalay, Sagaing, Bagan, Magwe and Pyay, before emptying in the fertile Irrawaddy delta.
But today the river is faced with an unprecedented threat in the form of ongoing dam projects in Kachin State.
Burma’s previous ruling military regime and China’s state-owned Chinese Power Investment Corporation (CPI) agreed to builtamegadam at Myitsone, the confluence that acts as the source of the Irrawaddy. If completed, the hydropower dam project will be the 15th largest hydroelectric power station in the world, and will cost an estimated US $3.6 billion.
The length of the dam is to be about 499 ft (152 m), and its height about 499 ft, equivalent toa50-story building. The surface area of the reservoir is to be 295.8 sq mi (766 sq km), larger than the city state of Singapore.
Environmentalists, activists and politicians have given voice to growing concerns about the fate of this mighty river, but the government is reluctant to take action to stop construction.
Meanwhile, political parties and independent candidates have called on the Supreme Court to take action to save the Irrawaddy River.
“We send an open letter today,” said Win Cho, an independent candidate. “We are calling for an official response into the issue of the Irrawaddy River and the Myitsone dam project.”
Win Cho said other signatories included: Bauk Ja from the National Democratic Force; Soe Kyi from Thanlyin Township; Aung Myo Oo from Kyeemyindaing Township; and Min Aung from Botahtaung Township, all in Kachin State.
Burmese Home Ministry bans talks on peace
by Abbot Shwe Nya Wah
Friday, 02 September 2011 10:27 Ko Wild
Chiang Mai (Mizzima) – Two talks on peace byapopular Buddhist abbot have been banned by the Burmese Home Ministry. The talks, by Abbot Ashin Pyinnay Thiha, had been approved by the Ministry of Religion.The talks, or sermons, were to be held on Thursday and Friday at Zabuthiri Beikman,abuilding owned by the Religion Ministry in Mayangon Township in Rangoon.
Friday, 02 September 2011 20:57 Kun Chan
Chiang Mai (Mizzima) – More than 400 refugees—mostly children—in Karenni refugee camp in Mae Hong Song in northern Thailand have been infected byafever with symptoms similar to dengue fever.Camp health officials said that about two-thirds of the patients are children between the ages of eight and 18, who have high temperatures, coughs andasore throat. Officials are doing tests now to determine the exact cause of the illness.
If the disease is diagnosed as dengue fever, an infected patient must be separated from other people, the medical official said.
During August, more than 300 refugees received medical treatment at the clinic in Quarter No. 9, and more than 100 received treatment ataclinic in Quarter No. 1.
“Many children who attended school are infected withavirus. When they sneeze, the virus spreads in the air,”amedical worker told Mizzima. Medical officials said thatasimilar fever outbreak spread through Karenni camp No. 1 in 2009.
Also, starting two weeks ago, an eye disease has infected 102 patients in the camp, said Nga Meh,aclinic health worker.
Meanwhile, health workers distributing information about preventive measures to combat the diseases.
About 15,000 Karenni refugees who fled from the fighting in Burma between government troops and the Karenni National Progressive Party have taken refuge at Karenni camp No. 1.
There are nine refugee camps along the Thai border, including two Karenni camps. Out of more than 145,000 refugees in the camps, about 65,000 were sent to resettlement countries from 2006 to 2010.
Friday, 02 September 2011 21:52 Zwe Khant
New Delhi (Mizzima) – Twelve Burmese working journalists have been added to the Burmese National Press Award committee charged with distributing national-level prizes for the best journalistic work in 2011.A committee member, Maung Wun Tha, said the awards would to given to the highest caliber work that meets the professional standards set by the committee.
Burma’s National Parlaiment or Amyotha Hluttaw approved the creation ofa‘peace committee’ to attempt to solve the country’s ongoing, and seemingly intractable ethnic conflicts. With sources claiming that opposition icon Aung San Suu Kyi could be included in the commitee.The committee was approved on Wednesday but not made fully public till yesterday. The parliament has not madeafinal decision on who will be on the committee.
Dr Nay Zin Latt,apolitical advisor to the Burmese President, has moved to distance himself from exiled media reports that the government is planning to hostanational-level political forum.Reports suggested that politicians and activists from inside and outside the country, including Aung San Suu Kyi would meet in the capital in November.
Nay Zin Latt however added that; ”My quote made it look like we are making moves ahead of the government. We are just advisors – we give advice and it is up to the president and the government to decide the procedure. This is notamatter that we can decide,” said Dr Nay Zin Latt.
The way the United Nations and most governments act, I sometimes wonder if Karen State is in Burma. Certainly they don’t treat us like we are in Burma. There is considerable irony in this. Often the Karen National Union (KNU) is accused of fighting for an independent separate state. In fact we changed our policy towards federalism as far back as 1956, and now supportafederal democratic Burma.The international community seems to think we are not part of Burma. That is the only reason I can think of for why they make policy on Burma whilst ignoring what happens in Karen State.
စိတ်ကြွပီကေကျွေးပြီး ငွေခြိမ်းခြောက်ရယူသည့် အသက် ၂ဝ အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ရဲက ပုဒ်မ ၃၈၆ ဖြင့် ဖမ်းဆီးလိုက် ပြီဖြစ်ကြောင်း
စိတ်ကြွပီကေကျွေးပြီး ဝတ်လစ်စလစ်ပုံများ ရိုက်ယူကာ ငွေခြိမ်းခြောက်ရယူသည့် အသက် ၂ဝ အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ရဲက ပုဒ်မ ၃၈၆ ဖြင့် ဖမ်းဆီးလိုက် ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်မြို့ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းမှ သိရသည်။ ပြည်မြို့ရှိကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ တစ်ဦးကို ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေ သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပီကေကျွေးကာ အင်္ကျီချွတ်ပြီး ဝတ်လစ် စလစ်ပုံ ရိုက် ယူခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းဓာတ်ပုံများကို အင်တာနက်ပေါ်တင်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် ပြီးငွေအကြိမ်ကြိမ် တောင်းခံ ခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း ၅ဝဝ ခန့် ပေးခဲ့ရကြောင်း တရား လိုနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကပြောသည်။
”အစ ကတော့ မသိ ဘူးပေါ့၊ နောက်မှ သူက အဒေါ်ကို ဖွင့်ပြော လိုက်တော့ဖြစ်ရပ်အကုန်းလုံးသိကြ ရတယ်၊ဒါနဲ့ရဲစခန်းကို သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ က တိုင်ကြားလိုက် ရတယ်” ဟု ၄င်းက တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောသည်။ ယင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပေါ်ပြူလာနယူးစ် ဂျာနယ်မှ ပြည်မြို့ ရှိ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းသို့ ဆက် သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ဒီအမှုဖြစ်တာ ဟုတ်ပါတယ်၊ တရားခံလို့ ယူဆရတဲ့ သူကိုလည်း ဖမ်းမိထားပါတယ်၊ တရားရုံးကို အမြန်ဆုံးတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်နေပါ တယ်”ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းနေ တရားခံဟု ယူဆရသူ အမျိုးသမီး ငယ်က ခြိမ်းခြောက်၍ ရယူထား သော ငွေစုစုပေါင်း သိန်း ၅ဝ နှင့် ရန်ကုန်ရိုးမဘဏ်မှမထုတ်ရသေး သည့် ငွေကျပ် ၄၆ သိန်းတို့ အပါအဝင် ခြိမ်းခြောက် ၍ ရထား သောငွေဖြင့် ပင်ဝယ်ယူထားသည့် လတ်ဝတ်ရတနာ ကျပ်သိန်း ၈ဝ ခန့်တို့ကိုတရား လို ကျောင်းသူ ၏ မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ သိမ်းဆည်း ရမိ ခဲ့ကြောင်းကို ပြည်မြို့အမှတ် (၂) ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးဦးဇော်လွင်နှင့် အမှုစစ်ရဲအုပ်ဦးဇော်လှိုင်ထွန်း တို့ထံမှ သိရသည်။
”ပြည်မြို့က နွေဦးကံ့ကော် အဆောင်မှာ ဖမ်းမိတယ်။ သူနဲ့အ တူလက်ကိုင်ဖုန်းကိုပါ သိမ်းဆည်းမိ ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အခြားမိန်း ကလေးတွေရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံ တွေကိုပါ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်” ဟု ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှ ရဲအုပ်ဦးစိုးမင်း ကပြောသည်။ တရားလို ကွန်ပျူတာတက္က သိုလ်ကျောင်းသူသည် ၂ဝ၁ဝ ပြည့် နှစ်သြဂုတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့မှစ၍ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်းငွေသိန်း ၅ဝဝ ခန့်ကို တရားခံဟုယူဆရသူ ထံအကြိမ် ကြိမ်ပေးအပ်ခဲ့ရကြောင်း ထိုငွေများကို ပြည်မြို့ရှိ ရိုးမဘဏ်မှ ရန်ကုန်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့ရသည့်အပြင် မှတ်ပုံတင်ကိုပါ ပေးထားခဲ့ရကြောင်း အိမ်ရှိမီး ခံသေတ္တာအတွင်းမှ စိန်နှင့် ရွှေများအကုန်လုံးကို SURE ကား ဖြင့်ခိုးထုတ်ယူခဲ့ရန် အကြပ်ကိုင် ခြိမ်းခြောက်လာသဖြင့် ဖွင့်ပြောမှ အလုံးစုံသိခဲ့ရပြီး ရဲစခန်းသို့တိုင် ကြားခဲ့ရကြောင်း တရားလိုနှင့်နီးစပ် သူကပြော သည်။
တရားလိုနှင့် တရားခံဟုယူ ဆရသူ အမျိုးသမီးတို့သည် ၂ဝ၁ဝ မတ်လတွင် မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ၂ဝ၁ဝ ဇူလိုင်လတွင် တရားခံဟုယူ ဆရသူ အမျိုးသမီးသည် ပြည်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာကာ အိမ်ငှားနေထိုင် ပြီးနောက် အဆိုပါ အိမ်၌တရားလို အားစိတ်ကိုမေ့မြောစေသော ပီကေ ကျွေးကာ အဝတ် များချွတ်၍ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူခဲ့သည်။ထို့နောက် ဓာတ်ပုံကို အင်တာနက်တင် မည်ဟုခြိမ်းခြောက် ကာငွေညှစ်ခဲ့သည်ဟု တရားလိုနှင့် နီးစပ်သူကပြောသည်။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီမှ အဆိုပါအမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ် သက်၍ ”ဒါက မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ် တစ်ခုပဲ။ ပိုဆိုးတာက ဓာတ်ပုံပြပြီး ငွေခြိမ်းခြောက်တာ ဆိုတော့ တော်တော်အောက်တန်း ကျတယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဘဝလမ်း ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ အမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက်နောက်လူတွေ ဆက်မ လုပ်နိုင်အောင် ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချ မှတ်သင့်တယ်”ဟု ပြောသည့်သတင်းအား POPULAR JOURNAL တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်.။
About9hours ago by Irving Oala
1. San Yati Moe Myint
2. Par Ya Ku
5. Adrian Zaw
အဲ့ဒီကောင်မလေးက ပုံထဲမှာသာ သွယ်သွယ်လေးဖြစ်နေတာ … အပြင်မှာ ပုလုံးလုံးလေး ဟိဟိ
တစ်လောတုန်းကတော့ ထိပ်ပြောင်သမ္မတအဖွဲ့က ဝေဖန်ခံမယ်ဘာမယ်ဆိုပြီး
ပြည်ပသတင်းဆိုဒ်တွေကို မြန်မာပြည်ထည်းက ပြန်ကြည့်လို့ရနေကြတယ်လို့ဆိုရာကနေ
ဆိုတော့ကာ ထုံးစံအတိုင်း ကြုံရင်တော့ လက်ဆော့ပြီးတင်ပေးရသေးတာပ
ပြည်တွင်းသတင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်ပသတင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းဆိုတာဟာ သတင်းပါဘဲ
သတင်းဆိုတာဟာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟုတ်ပါဘူး ( လူသာမန်တွေတွက် )
ဒါ့ကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ သတင်းရဲ့ မူရင်းဆို့စ်လို့ခေါ်သလား အဲ့ဒါက တူပေမယ့်
ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းတွေရဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့ အာဘော်တွေရဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကမတူပါဘူး
ခင်ဗျားတို့လို ပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ လေ့လာတတ်ကြမယ်ဆိုရင် အကျိုးကြီးမယ်လည်းထင်မိပါတယ်
ဆိုခြင်တာက သတင်းတွေပေါ်မှာ ဝေဖန်ကြပါ သုံးသပ်ကြပါလို့ ပြောခြင်တာပါ
ဒါကတော့ ဆရာလုပ်တာပေါ့ဗျာ :D
မြန်မာစစ်သည်များအားလုံးနီးပါး ရှေ့တန်းထွက်ရသောကြောင့် ဇနီးမယားများ ကင်းစောင့်ရ
ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 01 ရက် 2011 ခုနှစ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်း – သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်း
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအား မြန်မာ စစ်တပ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရာ သျှမ်းပြည်ရှိ မြို့နယ်အချို့တို့၌ တပ်စောင့်မရှိကြတော့ဘဲနောက် တန်းကျန် စစ်သားမိသားစုများကပြည်သူ့စစ်များနှင့် အတူ အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်ရသည်ဟု သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း သတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါသည်။
“ နောင်ချို၊ ကျောက်မဲ၊ မိုးမိတ် က တပ်တွေ ကချင်ဖက် တက်တိုက်တာလဲ ရှိတယ်။ ဝမ့်ဟိုင်းဖက်ဆင်း တာလဲ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ တပ်လုံခြုံရေး မရှိတော့ဘူး။ စစ်သားမယား၊ သားသမီးတွေ နဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေ အလှည့်ကျ စောင့်ရ တော့တာ ပေါ့” ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် တပ်မိသားဝင်တဦးကပြောသည်။
ထိုသို့ တတပ်လုံးနီးပါး ရှေ့တန်းထွက်နေရသည်မှာ မန္တလေး – လားရှိုးကားလမ်း တလျှောက်ရှိ မြန်မာ တပ်ရင်းများ ဖြစ် ပြီး အချို့တပ်များမှာ ညပိုင်းတပ်တွင်း၌ မအိပ်ရဲကြသည်အထိရှိနေကြောင်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
“ကျောက်မဲ ခမရ ၅၀၁၊ ၅၀၂ ၊ မိုးမိတ် ခမရ ၃၄၈၊ ခလရ ၂၂၃၊ ၂၇၆ တို့ဆိုရင် စစ်သားမယားတွေ ကင်းစောင့် နေကြတာ တွေ့ရတယ်။ ပြည် သူ့ စစ်တွေနဲ့ အလှည့်ကျ စောင့်ကြတယ်။
မိုးမိတ်ကတပ်တွေဆိုရင် အဲ့ဒီ စစ်သားမယားတွေ တပ်ထဲမှာ မအိပ်ရဲကြဘူး။ ဘုန်း ကြီးကျောင်းတွေ၊ ခင်ရာမင်ရာအိမ်တွေမှာသွားအိပ်ကြ တယ်။ အထက်အမိန့်ကြောင့်သာ သူတို့ ကင်းစောင့်ရတာ တကယ်တော့ သူတို့လဲ သေနတ်မပစ် တတ်ဘူး။ စစ်သားမယားတချို့ ဟာသလုပ်ပြီးပြော နေကြတယ်။ တကယ်လို့ ရန်သူလာရင်တော့ထဘီလှန်ထားပေးရုံဘဲရှိ တော့တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့” ဟု ၎င်းက သျှမ်းသံတော်ဆင့်အား ပြောပြသည်။
အဆိုပါတပ်များမှာ အများအားဖြင့် ကချင် ကေအိုင်အေ တပ်အား ထိုးစစ်ဆင်နေရသည့်တပ်များဖြစ်ကြောင်း၊ ညစဉ်ည တိုင်း တပ်တွင်း၌ နေရဲသူမရှိ၊ တပ်ကြီးဟောင်းလောင်းသာ ကျန်နေကြောင်း ဒေသခံများထံမှကြား သိရသည်။
ရှေ့တန်းတက် စစ်သားများမှာ သေကြေကြသည်မှာများပြားသဖြင့် ရှေ့တန်း မထွက်မှီ နှုတ်ဆက်ပွဲသဘော မျိုး မိသားစုဝင် ကလုပ်ပေးကြောင်း၊ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာထွက်ရာတွင်လည်း မိသားစုဝင်များက ရွှေလီ – ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံအထိ သွားရောက်ပို့ ဆောင်ကြကြောင်း မန္တလေးရောက် မိုးမိတ်မှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ တဦးက လည်း ပြောသည်။
“ စစ်သားမယားတွေလဲ သနားစရာတော့ကောင်းတယ်။ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်။ ကိုယ့်ယောက်ျားရှေ့တန်း ပါသွား ရင် သေမယ်လို့ သိသိကြီးနဲ့ အထက်အမိန့်ကိုမလွန်ဆန်ရဲဘူးကော်။ တကယ်တော့တပ်ထဲမှာ နေတာစားဝတ် နေရေး အဲလောက် ကျဉ်းကျပ် ဆင်းရဲနေတာ” ဟု မချိတင်ကဲ ပြောပြသည်။
ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာ၌ မိမမြင် ဖမမြင် သေမည့်အစား သားမယားရှေ့၌ပင်အသေခံတော့မည်ဟု ဆိုကာ ခမရ ၃၄၈ တပ်၌ မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသည့် စစ်ဗိုလ်တဦးလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ကျောင်းသူက ပြောသည်။
“တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် မိုက်ရိုင်းတာတော့ မိုက်ရိုင်းတာပေါ့။ တကယ်တော့ ကျောင်းသားတယောက် အနေနဲ့ ကြည့်ရင် မြို့ပေါ်ကလူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ အောက်ခြေတပ်သားအဆင့်တွေဟာ အရမ်းကိုသနား စရာကောင်းပါ တယ်။ သူတို့အရာရှိက လမ်းလျှောက်ဆိုရင်လဲ ဘယ်လောက်ဘဲနေမ ကောင်းနေပါစေ ခြေကျင် လျှောက်ရတာဘဲ။ သူတို့ အရာရှိ ထမင်းမစား ပြီးမချင်း ဘယ်လောက် ဆာဆာ သူတို့ မစားရဘူး။ ကင်းစောင့်နေ ရတယ်။ သူတို့ ဆန့်ကျင်နိုင်ပါရက် နဲ့ဘာအကျိုးအမြတ်မှမရဘဲ အထက် အမိန့်လိုက်နာနေတာကိုကပိုအံ့ဩ စရာ ကောင်းတာ” – ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
သျှမ်းပြည်၌ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်အား မြန်မာစစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသည်မှာ ၅ လကျော်ကြာပြီ ဖြစ်ရာ မြန်မာစစ်တပ်ဖက်က သေကြေဒဏ်ရာရများပြားသဖြင့် ရှေ့တန်းတက်ရဲဘော်နှင့်အရာရှိအများစုမှာ စိတ်ဓါတ်ကျနေကြ ကြောင်းလည်း တပ်နှင့်ရင်းနှီးဝင်ထွက်နိုင်သူ ကုန်သည်များပြောပြချက်အရသိရသည်။ အလားတူ ဂျွန်လအစောပိုင်းက စတင်ခဲ့သည့်ကချင်ပြည်စစ်မျက်နှာတွင်းလည်းအစိုးရတပ်ဘက်အများ အပြား သေဆုံးသည်ဟု ကချင်သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါသည်။
မြောက်ကိုရီးယားစာ ရန်ကုန်မှာ စားနိုင်ပြီ
မြောက်ကိုရီးယား ဆိုရင် လူတွေက စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ အထူသဖြင့် မြန်မာတွေလည်း စိတ်ဝင်စားတာပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၈ နှစ်က မြန်မာပြည်မှာလာပြီး တောင်ကိုရီးယား သမ္မတကိုလုပ်ကြံဖို့ ဗုံးခွဲသွားတာကိုး။ ခုခေတ်ဆို စစ်ထဖြစ်ကြမလား မသိဘူး။ ပြောသာပြောတာ စစ်အစိုးရက မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ တရားဝင် တောင်းပန်မှု မရဘဲ သူကသွားပြီး အမြီးနှန့်ပြပြီး ပြန်ပေါင်းထုပ်ခဲ့တယ်။ ခုတော့ အဆက်အဆံ ပြန်ကောင်းနေပြီပေါ့။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ပထမဆုံး စားသောက်ဆိုင်ကိုတောင် ရန်ကုန်မှာ ဖွင့်လိုက်ပြီ။ “ပြုံယမ်း ကော်ယို” တဲ့။
မြောက်ကိုရီးယားဟာ အဆိုးတကာ့ ထိပ်ခေါင် ကင်မ်ဂျုံအီလ် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံ၊ ပြည်သူတွေကို အငတ်ထားပြီး စစ်ရေးချဲ့ထွင်နေတဲ့ နိုင်ငံ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ရန်စပြီး နျူပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ နိုင်ငံ၊ စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို ဆွေစဉ်မျိုးဆက် သတ်တဲ့နိုင်ငံ ဆိုတာ မီဒီယာတွေမှာ ပုံမှန် မြင်နေရတာတွေပါ။
တလောက နော်ဝေ Utoya မှာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူသတ်မှု ဖြစ်တုန်းက နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက ယဉ်ကျေးမှုစုံဝါဒကို လက်မခံနိုင်ရင် မြောက်ကိုရီးယားမှာ သွားနေချေ လို့ မှတ်ချက်ပေးဖူးပါတယ်။
တလောကလည်း ရုပ်ရှင်စီးရီးတခုမှာ ရန်ကုန် မြောက်ကိုရီးယားဗုံးခွဲမှု ဇာတ်ဝင်ခန်း ထည့်ရိုက်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ဘာဖြစ်ဖြစ် သိရခက်တဲ့၊ လျှို့ဝှက်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားကတော့ ရန်ကုန်မှာ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ မြောက်ကိုရီးယား သံရုံးက နောက်ကွယ်က ဖွင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်လက်ထက်ကတည်းက မြောက်ကိုရီးယားက ဒီလို ဖွင့်ချင်နေတာလို့ ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်ကတော့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအရေး လေ့လာသူ မစ္စတာ ဘာတေးလ်လစ်တနာကလည်း မြောက်ကိုရီးယား စားသောက်ဆိုင်တွေ အာရှမှာ ဖွင့်လာတာကို ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ရေးဖူးတာ သတိရမိပါတယ်။
သတင်းအပြည့်အစုံကို ဒီမှာ မြန်မာလိုနဲ့ ဒီမှာ အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ပါ။
ဇီးကွက်စည်းဘွားရေးစနစ်ဖော်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒအရ ထူးကုမ္ပဏီကလည်းပြုံယမ်းမြို့ မှာ နေပြည်တော်ကော်ရည် ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ (စား)သောက်ဆိုင် ဒါမှမဟုတ် အနှိပ်ခန်းသွားဖွင့်သင့်တာပေါ့။ မြင့်မြတ်သောခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်မ်ကနိုင်ငံ့တာဝန်တွေကို နေ့ညမအားထမ်းဆောင်နေရလို့ အညောင်းမိနေလို့။ :-p
ရှေ့အမြင်မှာ စားသောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ထားမယ် ။
နောက်ကွယ်မှာ ဆောင်ကြာမယ်တွေနဲ့လှုပ်ရှားမယ် ။ ရသမျှ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးလူမှုရေးသတင်းတွေရယူမယ် ၊ သူတို့နိုင်ငံပြန်ပို့မယ် ၊ နိုင်ငံတကာက၀င်ထွက်နေတဲ့သူတွေကိုထောက်လှမ်းမယ် ၊ အမည်ခံစားသောက်ဆိုင်ထောက်လှမ်းရေး ။ မြန်မာစစ်အစိုးရကလဲ ဒါမျိုးတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ လုပ်ဆဲပါ . ထောက်လှမ်းရေးကျောထောက်နောက်ခံပြု လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၊ ဘီယာဆိုင် ၊ အနှိပ်ခန်း ၊ ကာရာအိုကေခန်း ၊ –ာခန်းကစလို့ ပဲ ။ ဘာမှတော့ အထူးဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး ၊
ထန်းပင် ထန်းတောတို့ဝေစည်နိုင်ဦးမည်လား
“၀ုန်း” ခနဲ မြည်သံနဲ့အတူ လဲကျသွားတဲ့ ထန်းပင်၊ အလန့်တကြား အော်မြည်ပျံပြေးတဲ့ ငှက်တွေ၊ လှိမ့်တက်လာတဲ့ ဖုန်လုံးကြီးတွေကို စိတ်မသာမယာ ငေးကြည့်ပြီး ဦးတင်မြ တယောက် သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချရင်း ..
“ဟူး … ထန်းပင်တွေလည်း တော်တော်များများ ကုန်ပါပြီ။ တအုံးအုံးနဲ့ လှဲနေကြတော့တာပဲ” လို့ ဆံပင်ဖြူဖြူတို့ကြားကနေ နဖူးထိ စီးကျလာတဲ့ ချွေးတွေကို ခပ်နွမ်းနွမ်းပုဝါတခုနဲ့ သုတ်ပြီး ညည်းတွားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း အထက်အညာဒေသ မကွေးတိုင်း၊ ထန်းလျက်ပေါတဲ့ ပခုက္ကူခရိုင် မြိုင်ဒေသရဲ့ ထန်းတောတွေနား၊ ထနောင်းပင်ရိပ်အောက်က ထန်းလက်တွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ သူ့တဲလေးရဲ့အတွင်းဖက်၊ ဖျာကြမ်းတချပ်ပေါ် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ခေါက်ထားတဲ့ အရောင်မထွက်တော့တဲ့ အညာစောင်နွမ်းနွမ်း၊ ခေါင်းအုံးမည်းညစ်ညစ်နဲ့ အိပ်ရာရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ထန်းလျက်ဖိုဘေးမှာတော့ သူ့ရဲ့ ဇနီးသည်ဟာ ယောင်းမတချောင်းနဲ့ မွှေရင်း၊ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေပါတယ်။
“ဟိုး ၇၄၊ ၇၅ ခုနှစ်လောက်ကနဲ့စာရင် အပင်တွေက တော်တော်နည်းသွားပြီ။ နောက်ဆို ထန်းပင်တောင် ရှိပါ့ဦးမလားပဲ” လို့ သူက ညည်းပါတယ်။
သူညည်းနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့ဒေသတ၀ိုက်က ထန်းတောပိုင်တွေဟာ ထန်းပင်တွေကို ခုတ်ပြီးရောင်းတာတွေ တဖြည်းဖြည်း များလာတာကြောင့်ပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ ၀န်းကျင်တုန်းမှာတော့ ယာတဧကမှာ ထန်းပင် အနည်းဆုံး ၁၅ ပင်ကနေ ၇၀၊ ၈၀ အထိ ရှိနေရာကနေ အခုဆိုရင် ၅ ပင်ကနေ ၂၀၊ ၃၀ လောက်အထိပဲ အများဆုံး ရှိတော့တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုခုတ်နေကြတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ထင်း လိုအပ်မှုများနေတာရယ်၊ ထန်းတက်လုပ်ငန်းကို လူငယ်တွေ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းလာတာတွေကြောင့်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ထန်းလျက်အစား ကြံသကာကို အစားထိုးတာကြောင့် ထန်းလျက်အသုံးနည်းလာကြတယ်၊ ထန်းလျက်ကြိုရာမှာ ကုန်ကျတဲ့စရိတ်နဲ့ ပြန်ရတဲ့ငွေ မကာမိဖြစ်ပြီး ထန်းလျက်ဖိုတွေ စီးပွားရေးကျဆင်းရတယ်
ဆိုတာကလည်း ဟောတပင်၊ ဟောတပင် ခုတ်နေကြရတဲ့အကြောင်းရင်းတခုပါပဲ တဲ့။
ထန်းသမားတွေရဲ့ နဂိုရှိရင်းစွဲဘ၀ကိုက ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြတာကြောင့် စီးပွားတိုးတက်ဖို့ ထန်းပင်တွေ၊ ထန်းတောတွေကို စွန့်ခွာပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေး စတဲ့မြို့ကြီးတွေ၊ ကျောက်တူးတဲ့နေရာတွေအပြင်
မလေးရှားလို နိုင်ငံတွေအထိ သွားရောက်စွန့်စား အလုပ်လုပ်ကြတာ တနှစ်ထက်တနှစ် များလာလို့ ထန်းတောမှာ ထန်းတက်မယ့်လူငယ်တွေ မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သူက “ထင်းတွေရှားတယ် ဆိုတာထက်လေ ထန်းလျက်က ဈေးမကောင်းတော့၊ လူငယ်တွေက ထန်းမတက်ဘဲနဲ့ မလေးရှားသွားကြတာ များလာတာ။ သန်သန်မာမာ ထန်းတက်မယ့် လူငယ်တွေက မရှိတော့ အဲ့ဒီမှာတင် ထန်းပင်က အပိုတွေဖြစ်နေပြီးတော့ ဒါလည်း တကြောင်းပေါ့လေ။ နောက်ပြီးတော့ အခု ထင်းအတွက် ထန်းပင်ထုတ်ပြီး ခုတ်ရောင်းကြတာပေါ့လေ” လို့ ပြောပြပါတယ်။
ထန်းလျက်ကြိုရာမှာ လောင်စာအတွက် ထင်းကိုပဲ အဓိကထားသုံးနေရတာမှာ ထင်းဈေးကြီးတာ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ မြင့်တက်လာပြီး ထန်းလျက်ဈေးဟာ တက်လာတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းကို မမှီတာတွေဟာလည်း ထန်းတက်သမားတွေ၊ ထန်းလျက်ကြိုသူတွေအဖို့ ဒီလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာစေတဲ့ အချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။
“ထန်းလျက်ကျိုရတာလည်း ထန်းလျက်ဈေးနဲ့ ထင်းဈေးနဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ အရင်လိုမှမကိုက်တော့ဘဲနဲ့။ အခင်းတွေထဲက ရရာ ကောက်ပြီး ထင်းလုပ်နေရတာ။ နဂိုတုန်းကတော့ ထန်းလျက်တပိဿာ ဆန်တပြည်ဆို ထန်းသမားက မကြောက်ဘူးရယ်။ အခုက ၂ ပိဿာနဲ့ ဆန်တပြည်နဲ့ ညီနေတဲ့ အခုနှစ်တွေက ဆယ်စုနှစ်လောက် ဖြစ်လာတယ်။ ထန်းလျက်အသုံးလည်းနည်းတယ်ပေါ့။ ထန်းလျက်ဈေးကလည်း မရှိဘူးပေါ့။ အဲ့လိုတွေ အကုန်စုံကျတာ” လို့ ဦးတင်မြက ရှင်းပြပါတယ်။
မြိုင်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်က ရွာတွေမှာတော့ ထင်းအတွက် ပဲစင်းငုံရိုးခြောက်တွေကို သုံးကြသလို သက်တန်းကျ၊ ပိုးကျတဲ့ ထန်းပင်ကြီးတွေကို ခုတ်လှဲပြီး ထင်းအတွက် သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အခု အခြေအနေမှာကတော့ ထန်းသီးလှိုင်လှိုင်သီးနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ထန်းပင်ပျိုတွေကိုပါ ခုတ်ရောင်းလာကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ထန်းသီး၊ ထန်းရည်လှိုင်လှိုင်ထွက်တဲ့ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလတွေဟာ ထန်းသမားတွေအဖို့ ထန်းဖိုရာသီချိန်ဖြစ်ပြီး ထန်းလျက်ဈေးကောင်းတယ် ဆိုရင်တော့ ထန်းသမားတွေ ငွေရွှင်ကြတဲ့အချိန်တွေပါပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀မှာ ထန်းလျက်လုံးကြမ်း တပိဿာကို ကောက်ဈေး ၇၀၀ ကျပ်ကနေ ၇၅၀၊ ထန်းလျက်ဖြူ တပိဿာကို ကောက်ဈေး ၇၅၀ ကနေ ၉၀၀ အထိ ဈေးပေါက်ခဲ့ပြီး ပြန်ရောင်းဈေးကတော့ တပိဿာကို အနည်းဆုံးကျပ် ၁၀၀၀ အထိ စံချိန်တင် တက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို ထန်းလျက်ဈေး စံချိန်တင်တက်ခဲ့တာကြောင့် ထန်းသမားတွေ ငွေရွှင်ခဲ့ကြပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ ကောက်ဈေးက အမျိုးအစားအလိုက် အနည်းဆုံး ၂၅၀ ကျပ် ကနေ ၇၀၀ ကျပ် အထိပဲ ရှိတော့တာကြောင့်၊ ဆန်တပြည် အနည်းဆုံး ၉၀၀ ကနေ ၁၂၀၀ အထိ ပေးဝယ်နေရတဲ့ အခါမှာတော့ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေဖြစ်ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးတင်မြရဲ့ ဇနီးသည်က “ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထန်းလျက်ဈေးကောင်းလိုက်တော့ အရမ်းပျော်ကြတယ်လေ။ အခုတော့ မကိုက်တော့ဘူး။ တောင်သူကလည်း မိုးခေါင်တော့ ဘာမှ မရဘူးလေ” လို့ ပြောပါတယ်။
အညာက ထန်းသမားတွေဟာ ထန်းတောတွေအောက်က ယာမြေတွေမှာ ပဲစင်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်း အစရှိတဲ့ပဲတွေကို စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပေမယ့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်နေတာကြောင့် ထွက်လာတဲ့ပဲကို ရောင်းရငွေဟာ သူတို့တွေဘ၀ တ၀မ်းတခါး လှနိုင်တယ် ဆိုရုံပဲ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထန်းပင် ပင်စည်တွေကို ပန်းအိုးလို အလှဆင်ပစ္စည်းအဖြစ် ဟိုတယ်တွေ၊ တိုက်တာတွေမှာ ခမ်းခမ်းနားနား သုံးဖို့ နိုင်ငံရပ်ခြားတွေကပါ မှာယူလာကြတဲ့ အခါမှာတော့ အညာဒေသက ထန်းတောတွေကို ခုတ်လှဲရောင်းချဖို့ တွန်းအားတွေ ပိုဖြစ်လာပါတယ်။
ထန်းပင်ကို ခုတ်လှဲပြီး မခြောက်ခင် ၂ ရက်နဲ့ ၃ရက်အတွင်းမှာ ပင်စည်အောက်ပိုင်း ၅ ပေကနေ ၇ ပေအထိကို သေချာဖြတ်တောက် သန့်စင်၊ ရွေပေါ်ထိုး အချောသပ်ပြီး အရောင်တင်လိုက်တဲ့အခါ လှပတဲ့ အသွင်အပြင် ရှိတာမို့ ဟိုတယ်ကြီးတွေ၊ အဆင့်မြင့်နေအိမ်တိုက်တာတွေမှာ ပန်းအိုးအဖြစ်၊ အလှဆင်တိုင်လုံးတွေအဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီထန်းပန်းအိုးကြီးတွေကို တရုတ်နိုင်ငံက အများဆုံး မှာယူကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီလို နိုင်ငံရပ်ခြားကို တင်ပို့ဖို့၊ နွားတင်းကုပ်ဆောက်ဖို့၊ နွားစားခွက်လုပ်ဖို့ ဂိုဒေါင်လိုနေရာတွေမှာ ထုတ်တန်း၊ ရက်မ စတာတွေ လုပ်ဖို့အတွက် ထန်းပင်တွေ ခုတ်လှဲရောင်းမယ် ဆိုရင် ထန်းပင် တပင်ကို အနည်းဆုံး ကျပ်တသောင်းကနေ နှစ်သောင်းအထိ ရတတ်ကြတယ်လို့ ထန်းသမားတွေက ပြောပါတယ်။ ထင်းအတွက်နဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ကျပ် ၄ ထောင်ကနေ ၇ ထောင်လောက်ပဲ ရတာကြောင့် နိုင်ငံခြား ပို့ဖို့အတွက် ပိုရောင်းလိုနေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို ထန်းပင်တွေခုတ်တဲ့အပေါ် သက်ဆိုင်ရာ သစ်တောဦးစီးဌာနကလည်း ကန့်သတ်တာတွေမရှိတာကြောင့် ဒီလို အလွန်အကျွံခုတ်တာတွေ ဖြစ်လာပြီး ထန်းတောတွေ တုံးသွားမှာကို စိုးရိမ်တယ်လို့ ဦးလှမောင်က ဆိုပါတယ်။
“ထန်းပင်ဆိုတော့ သစ်တောက မဆိုင်ဘူးထင်တယ်။ ဘာမှ ကန့်သတ်တာ မရှိဘူးလေ။ အပင်တွေက နည်းသွားလိုက်တာ ဆိုတာ။ အသစ်ပြန်စိုက်လည်း ထန်းပင်က အနှစ် နှစ်ဆယ်၊ အစိတ်လောက်မှ ဖြစ်တာလေ” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ထန်းပင်ဟာ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ဒေသတွေမှာ အများစု ပေါက်ရောက်ကြပြီး အပင်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုဟာ အပြင်ဖက်မှာ အပွသားနဲ့ အလယ်မှာ အူတိုင် ပါတာကြောင့် ရေသိုလှောင်နိုင်မှု မြင့်မားပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ခံတဲ့ အပင်ဖြစ်တာကြောင့် အထက်အညာဒေသအတွက် စိမ်းလန်းစိုပြေဖို့ အားထားရတဲ့ အပင်တမျိုးပါ။ အထက်အညာဒေသဘက်တွေ အပြင် မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်း တို့ဖက်မှာလည်း ထန်းပင်၊ ထန်းတောတွေ ပေါက်ရောက်နေတာကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ထန်းစေ့ကနေ ထန်းပင် စိုက်တဲ့အခါ တနှစ်ကြာမှ အပင်ပေါက်ထွက်ပြီး အပင်တက်ရာမှာလည်း တနှစ်ကို ၆ လက်မကနေ ၁ ပေအထိပဲ အများဆုံးတက်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးလှမောင်ကတော့ တနှစ်ကို ကြက်မတ၀ပ်စာ တက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရွယ်ရောက် ထန်းတပင်ရဲ့ အမြင့်ဟာ ပေ ၆၀ ကနေ ၈၀ အထိ ရှိတတ်ပြီး သက်တမ်းကတော့ နှစ် ၁၀၀ ကနေ ၁၅၀ အထိရှိပါတယ်။
ထန်းဖိုနဲ့ထန်းမ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ ထန်းပင်အဖိုက ထန်းနို့ချောင်းကို လှီးပြီး စိမ့်ထွက်လာတဲ့ ထန်းရည်ချိုတွေကို ခံယူကြသလို ထန်းမပင်ရဲ့ ထန်းသီးခိုင်ကနေ ထန်းရည် ခံယူကြပါတယ်။ ထန်းရည်ခါးကိုတော့ အခါးဖောက်ထားတဲ့ သူတို့အခေါ် အလျင်အိုးနဲ့ ခံယူကြပါတယ်။
ထန်းရည်ချို၊ ထန်းရည်ခါး၊ ထန်းလျက်၊ ထန်းသီးမုန့်၊ ထန်းပင်မြစ်စတဲ့ စားဖွယ်ရာတွေအပြင်၊ ထန်းလက်တွေနဲ့ ထိုင်ခုံ၊ ထန်းခေါက်ဖာစတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ၊ ကလေးတွေကစားစရာ ထန်းဖူးငါးရုပ်၊ ငှက်ရုပ်စတာတွေ၊ အမိုးအကာတွေပေးတဲ့ ထန်းပင်ကြီးတွေကို ထိန်းသိမ်းကြဖို့ ထန်းပင်တပင်ဖြစ်ဖို့ ဆယ်စုနှစ်တခုလောက် အချိန်ယူရတာမို့ ထန်းပင်တွေကို လူငယ်တွေ၊ ဒေသခံတွေ တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ လိုနေသလို လောင်စာ လိုအပ်မှုအတွက်ကိုလည်း နည်းလမ်းရှာ ဖြေရှင်းသင့်နေပြီလို့ ထန်းသမားကြီးတွေက ဆိုပါတယ်။
“ညောင်ဦးဖီးတို့ ထန်းပင် တပင်ကနေ တပင် ခုန်ကူးတယ်ဆိုတာ ထန်းတောထဲ ထန်းပင်တွေ ပင်ချင်းကပ် အရွက်ချင်းထပ်နေတာကိုးဗျ။ အခုက ထင်းပြဿနာဗျာ။ ထင်းမရှိတော့ ရှိရာခုတ်၊ ထန်းပင်တွေပါခုတ်၊ ရောင်း။ ဒါနဲ့ပဲ တဖြည်းဖြည်း တောတွေက ပြုန်းပြီး ရာသီဥတုတွေက ဖောက်ပြန်လာတယ်။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်တော့ သီးပင်စားပင်တွေ မဖြစ်၊ အကုန် ထိခိုက်ကုန်တော့တာပေါ့” လို့ ဦးလှမောင်က ပြောပါတယ်။
ဦးတင်မြတယောက် ကတော့ “ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်ကတော့ဗျာ၊ ဒီ မြိုင်ဖက် ၀င်လာပြီ ဆိုရင် ထန်းပင်ထန်းတော ဆိုတာ ညို့မှိုင်းနေတာဗျာ။ ထန်းခလက်တဲသစ်လေးတွေထဲ ၀င်ထိုင်လိုက်ရင် အနံ့လေးကို မွှေးနေတာဗျ။ ထန်းလျက်ဖိုတွေ ဆိုတာလည်း ထန်းလျက်နံ့တွေကို သင်းလို့။ ထန်းတောထဲ ထန်းခလက်တဲလေးထဲထိုင်၊ ထန်းလျက်လေးနဲ့ ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့မြည်း။ တကယ့် စည်းစိမ်ဗျ။ အခုတော့ ထန်းပင်တွေက ပါးလာ၊ နောင်ဆို ဒီလိုမှ နေရပါ့မလားပဲ” လို့ ညည်းတွားနေပါတော့တယ်။ ။
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) – သောကြာ, 02 စက်တင်ဘာ 2011
လက်စားချေမှုတွေ မလုပ်ဘူးလို့ လစ်ဗျားယာယီအုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင် ဂတိပေး
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) – စနေ, 03 စက်တင်ဘာ 2011
လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း မိုမာဂဒါဖီ (Moammar Gadhafi) ရဲ့ဒေသဘက်က အရပ်သားတွေ သူတို့ဘက်ကိုကူးခဲ့ပါ၊ လက်စားမချေပါဘူးလို့ အမျိုးသားအသွင်ကူးပြောင်းရေး ကောင်စီ (NTC) က တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ အသွင်ကူပြောင်းရေးတပ်တွေဟာ လက်တုံ့နှင်းတာ မလုပ်ဆောင်ပါဘူး၊ သူတို့ရဲ့ ရန်ဘက်ကို ဂုဏ်သိက္ခာ မထိခိုက်စေအာင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံပါမယ်လို့ NTC ရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ အလီ တာဟိုနီ (Ali Tarhouni) က ထရစ်ပိုလီ (Tripoli) မြို့တော်မှာ စနေနေ့ကပဲ ပြောကြားသွားပါတယ်။
တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ထားတဲ့သူတွေကို ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတောင် တရားလက်လွတ် မလုပ်ပါဘူးလို့ သူကပြောသွားပါတယ်။ ထရစ်ပိုလီမြို့တော်က လုံခြုံရေးကို ကိုင်တွယ်ဖို့နဲ့ ဖမ်းဆီးထားသူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ ကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်းလိုက်တာကိုလည်း မစ္စတာ တာဟိုနီက ကြေညာသွားပါတယ်။
မနေ့က အစောပိုင်းမှာတော့ သူတို့ တပ်တွေဟာ အားသာမှုရထားတယ်၊ ဘယ်မြို့ကိုမဆို ဝင်ရောက်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ သွေးမြေကျ တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်စေချင်ပါဘူးလို့ NTC ခေါင်းဆောင် မူစ်တာဖာ အဘ်ဒဲလ် ဂျလယ် (Mustafa Abdel Jalil) က ပြောသွားပါတယ်။ လက်နက်မချတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဟောင်းအတွက် တပတ်တာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ဘန်ဂါဇီ (Benghazi) မြို့မှာကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ မစ္စတာ ဂျလယ် က ပြောသွားပါတယ်။ အခုအချိန်ဟာ မစ္စတာ ဂဒါဖီကို သစ္စာခံတဲ့ ဆာတဲ (Sirte)၊ ဘနီဝါလစ် (Bani Walid) နဲ့ တခြားဒေသ အများအပြားက လူတွေ အေးအေးချမ်းချမ်း လက်နက်ချဖို့ အချိန်ပါပဲလို့ သူကပဲ ပြောပါတယ်။
အတိုက်အခံဘက်က အားလုံး လက်နက်ချကြဖို့ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကို လာမယ့် စနေနေ့အထိ သက်တမ်း တိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ အရပ်သားတွေနေထိုင်နေတဲ့ ဒေသတွေကို ဝင်ရောက် စီးနင်းရတာမျိုးတွေ မလုပ်ရဖို့ NTC အရာရှိတွေက မျှော်လင့်ထားတာပါ။
လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင်ဟောင်း မိုမာဂဒါဖီအနေနဲ့ နောက်ထပ် သွေးမြေကျမှုတွေ အဖြစ်မခံဖို့နဲ့ လစ်ဗျား လူထုအတွက် တရားမျှမျှတတ ဖြစ်အောင် လက်နက်ချဖို့ အခု လစ်ဗျားနိုင်ငံသစ်ကို လွှတ်ထားတဲ့ တူရကီသံအမတ် အလီ ခမ်မဲလ် အိုင်ဒင် (Ali Kemal Aydin) က တောင်းဆိုသွားပါတယ်။
လစ်ဗျားနိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂ အထူး ကိုယ်စားလှယ် အီရန်မာတင် (Ian Martin) ကလည်း စနေနေ့က ထရစ်ပိုလီမြို့တော်ကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။
ရွှေညဝါဆရာတော် တရားပွဲ ပြည်ထဲရေးကပိတ်
ကိုဝိုင်း | ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၂ မိနစ် .
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ဖြစ်သော်လည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပိတ်ပင်သဖြင့် အစိုးရကို ဝေဖန်လေ့ရှိသော ရွှေညဝါဟု လူသိများသည့် ရန်ကုန် ကြည့်မြင်တိုင် သာဓုပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်မှ ဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ၏ တရားပွဲ ပျက်ပြားသွားသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာနပိုင် ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန် အဆောက်အအုံ၌ ကြာသာပတေးနှင့် သောကြာ
နေ့များတွင် တရားဟောရန် သက်တော် ၄၆ နှစ် (ဝါတော် ၂၇ ဝါရှိ) ရွှေညဝါဆရာတော်က စီစဉ်ထားခဲ့ရာ
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်မပြုကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူများကို ပြောကြားလာသည်ဟု အရှင်ပညာသီဟက အမိန့် ရှိသည်။
ရွှေညဝါ ဆရာတော်သည် ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အကျိုးဆောင်ချုပ်၊ စာသင်သားသံဃာ အပါး ၉ဝဝ ကျော်ရှိသည့် ကြည့်မြင်တိုင် သာဓု ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်၏ နာယက တိုက်ကြပ် ဆရာတော်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်း
“တယောက်နဲ့ တယောက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နေကြတာတွေ ကြားရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူး။ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ နားလည်ခွင့်လွှတ် သည်းခံပေးကြပြီးတော့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးကြပါဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျုပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးတရားတော်ကို ပထမည ဟောမလို့ဗျ” ဟု အရှင်ပညာသီဟက ပြောသည်။
“ဒုတိယညကျတော့ ရန်ဖြစ်လို့ ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်ဘုရားမှလည်း မဟောပါဘူး။ ဘယ်ပညာရှိမှ
လည်း မမိန့်ပါဘူး။ ရန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဘေးပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ဘုန်းကြီးက ဘုရားဟောထားတဲ့ တရားတော်တွေထဲက ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ ဟောပြမလို့ပါ။ အဲဒီခေါင်းစဉ်ကြားသွားလို့များ ပိတ်သွားတာလား မသိဘူး”
မည်သည့် အတွက်ကြောင့် တရားပွဲ ပိတ်ပင်သည်ကို ဆရာတော် ကိုယ်တိုင်ပင် မသိနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသော်လည်း အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများနှင့် နီးစပ်သည့် ဆရာတော်၏ ယခင် တရားပွဲအချို့ ပိတ်ပင်ခံရဖူးသည်။
သာဓုပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ကြီးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ၊ နိုင်ငံရေး၊ ဂီတ၊ ပန်းချီ၊ စာပေအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းဝင်များက သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့က ၂၃ နှစ်မြောက် လူထုအုံကြွမှု “ရှစ်လေးလုံး” နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ကျင်းပခဲ့သည်။
“ဒါက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းလာကပ်တာ သံဃိက ဆွမ်း ပုဂ္ဂလိကဆွမ်း မဟုတ်ဘူး။ နောက် သင်္ကန်းလာလှူတယ် သံဃိကလှူတာ ပုဂ္ဂလိက လှူတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ
ဘာများ ခွင့်မပြုနိုင်စရာအကြောင်း ရှိလို့လဲ။” ဟု ဆရာတော်ကမိန့်သည်။
ဆရာတော်၏ “ငါးပါးမမှောက်ကြပါစေနဲ့”၊ “မိုက်ကြွေးမိုက်ပစ်”၊ “ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်း တယောက်၏ စွမ်းအား”၊ “မတရားမလုပ်ကြပါနဲ့”၊ “သာသနာတော်ကို စော်ကားသူ တယောက်၏ နောင်တ” စသည့် တရားတော်များမှာ လူကြိုက်များသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုဖြစ်သော နိုင်ငံတွင် အစိုးရကိုဝေဖန်သည်ဟု ယူဆသော သံဃာတော်များကို အများပြည်သူ တရားဟောခွင့်များ ပိတ်ပင်လေ့ရှိသည်။
“ကိုယ့်ရဲ့ တရားဟောတာက တခြားဘာသာတရားကို ပုတ်ခတ်တာတွေ၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖြစ်အောင် ဖန်တီးတာရှိရင်တော့ ဒါကို ကန့်သတ်နိုင်တယ်လို့ ပြောထားတယ်။ အခု ဒီဆရာတော် ဟောထားတဲ့ အကြောင်းအရာက ဘယ်တော့မှ တခြားဘာသာကို ပုတ်ခတ်တာမရှိဘူး။ တရားဓမ္မနဲ့ လူသားတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ကိုယ့်ကျင့်တရား ကောင်းရေးကိုပဲ ဟောထားတာဖြစ်တယ်။” ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏မျက်နှာဖုံးဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသောဆောင်းပါးကိုပါ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်တွင်အင်္ဂါနေ့တွင်ထုတ်ဝေခွင့်ရရှိပါသည်ဟု အယ်ဒီတာချုပ်ဆရာဖေမြင့်မှပြောကြားသွာပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရင်တိုမြို့တွင် ကျင်းပမည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပြပွဲမှလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အကြောင်းပြန်လည်ရိုက်ကူးထားသည့် The Lady ဇတ်ကားကိုပြသသွားမည်ဟုသိရပါသည်။
မှောင်ခို ငွေလဲ ဈေးကွက် တွင် ဒေါ်လာ သန်းထောင် ချီ လည်ပတ်နေ
မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ မှောင် ခို ငွေလဲ ဈေးကွက် တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းထောင်ချီ လည်ပတ်
နေသည် ဟု မြန်မာ ၀ီကီလိခ် မှ ရရှိ သော ငွေကြေး ဈေးကွက် မှတ်တမ်း များ အရ သိရသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ရှိ အစိုးရ အဖွဲ အစည်းများ ဗဟိုဘဏ် နှင့် အစိုးရဘဏ်များ မှ ပိုင်ဆိုင်
သည့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ များမှာ သန်း ၄၀၀၀ ခန့် ရှိ သည်။ ဟိုတယ် ၊ ခရီးသွားလာ ရေး
၊လေကြောင်း ၊ ပို့ ကုန်သွင်းကုန် စသည့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ မှ လည်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ
ငွေ အနည်းဆုံး သန်း ၅၀၀၀ ဖိုးခန့် ပိုင် ဆိုင်သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ရှိ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များ ၏ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ပိုင် ဆိုင် မှု မှာ သန်း ၈၀၀
ခန့် ရှိ ပြီး ၊ အစိုးရ မဟုတ် သည့် အကူအညီပေးရေး NGO များ ပိုင် ဆိုင်သည့် အမေရိကန်ဒေါ်
လာ ငွေများ မှာ မူ သန်း ၁၀၀၀ ကျော်ဖိုး ခန့် ရှိ သည်။
မှောင်ခို ငွေ လဲလှယ် သည့် ဈေးကွက် တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀၀ နီးပါး ရှိ မည် ဟု ခန့် မှန်းရပြီး
ထို ငွေကြးဈေးကွက် တွင် နိုင်ငံ ခြားတိုင်း ပြည်ရောက် မြန်မာ များ မှ ပြည်တွင်း သို့ပြန်ပို့ ငွေများ
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ ၏ လဲလှယ်မှုများ၊ နယ်စပ် မှ ပစ္စည်း တင်ပို့ရန် နှင့် သွင်းယူရန် လဲ
လှယ်မှု များ မြန်မာ ပြည်ရောက် နိုင်ငံ ခြား သံတမန် နှင့် ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ မှ လဲလှယ်မှု
များ ၊ ပြည်တွင်း မှ ပန်းချီကား ၊ ရိုးရာ အမှတ်တရ နှင့် ရှေးဟောင်း ပစ္စည်း ၀ယ်ယူ ရန် အတွက်
လဲ လှယ် မှု များ အစ ရှိ သည် တို့ပါဝင် သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း သို့နေ့ စဉ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ မှ ၁၅၀ ထိ အကြောင်း အမျိုး မျိုး
ဖြင့် ၀င်ရောက် သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၁ ခု နှစ် များသည် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်းသို့အမေရိကန်
ဒေါ်လာ ငွေ စက္ကူ များ ၀င်ရောက် မှု အများ ဆုံး နှစ် ဖြစ်သည်။
ယခု တွက် ချက် မှု ထဲ တွင် ပြည်ပ မှ နိုင်ငံ တွင်း သို့စီးပွားရေး အရ ရင်းနှီးမြုပ် နှံ ရန် ၀င်ရောက်
လာ သည့် ငွေကြေးများ မပါဝင် ပါ။
ဂျီအက်(စ်)အမ်　၃သိန်း၊　၂သိန်း ဖုန်းများ စက်တင်ဘာတွင်　ရောင်းချပေးမည့် သတင်းမမှန်ဟု အတည်ပြု
Friday, 02 September 2011 07:23 ရွှေဒေါင်းတောင် အွန်လိုင်းဂျာနယ်
GSM phone မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ဂျီအက်အမ် ၂ သိန်း၊ ၃သိန်း ဖုန်းများကို စက်တင်ဘာလ အတွင်း ထုတ်ပေးမည် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိသော်လည်း ၂၀၁၂ နှစ် ဆန်းပိုင်းမှသာ စတင် ရောင်းချနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ အကြီးတန်းအရာရှိ ဦးဇော်မင်းဦး က အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ ဂျီအက်အမ် ၃ သိန်း၊ ၂ သိန်းဖုန်း လာမယ့် လပိုင်းမှာ ထုတ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့သတင်းဟာ မမှန်ပါဘူး” ဟု၎င်းက ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းများနှင့် ပတ်သက်ကာ ယခင် ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး ၄ သန်း သုံးစွဲနိုင်ရေး စီးမံကိန်း စတင်ပြီး ငါးလအကြာတွင် စတင် ရောင်းချနိုင်မည် ဖြစ်ကာ ကနဦး တပ်ဆင်ခများ ကိုလည်း ယင်း အချိန်မှသာ သတ်မှတ် ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ရှင်းပြသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်၏ ဖုန်းသုံးစွဲသူများ အကြားတွင် ဂျီအက်စ်အမ်၂သိန်း၊ ၃သိန်း ဖုန်းများ ထပ်မံချပေးမည် အပြင်လက်ရှိ ဖုန်းပြောခ ဖြစ်သော ၁ မိနစ် ၅၀ ကျပ်မှ လျော့ချပေးမည် ဟူသော သတင်းများလည်း ပျံနှံလျက် ရှိကြောင်း ဖုန်း သုံးစွဲသူတို့ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်များအရ သိရသည်။ ယင်းသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဦးဇော်မင်းဦးက “ ဖုန်းပြောဆိုခ ဈေးနှုန်းတွေလည်း အရင်နှုန်းထားအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးဖို့လျှော့ဖို့ အစီစဉ် မရှိသေးပါဘူး” ဟု အတိပြု ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေး သတင်း အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ကာ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာ၏ website နှင့် ရတနာပုံ Web Portal တို့တွင် သတင်းအသစ်များ အဆက်မပြတ် တင်ပေးလျက် ရှိကြောင်း ယင်းဝက်ဘ်များတွင် သတင်းအသစ်များ မရှိပါက အသစ်ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်မှု မရှိ၍ သာဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက် ပြောဆိုလိုက်သည်။ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းသည် ဂျီအက်စ်အမ် ၄ သန်း သုံးစွဲနိုင်ရေး စီမံကိန်းနှင့်အတူ ဖုန်း ဘီလ် (bill) များကို ဖုန်းသုံးစွဲသူ အချင်းချင်း ငွေလွှဲစနစ်ဖြင့် ထပ်မံငွေဖြည့် ပေးနိုင်သည့် စနစ်ကို စမ်းသပ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ စုံးစမ်း သိရသည်။
လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် မှ စွန့်ပစ် ရေတွင် လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အာဆင်းနစ် ဓါတ်ပါဝင်နေ
Wednesday, 31 August 2011 15:48 ရွှေဒေါင်းတောင် အွန်လိုင်းဂျာနယ်
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ်- ၃၁
မြန်မာ့ စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်မြို့၏ အထင်ကရ စက်မှုလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်နေသော လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်မှ စက်ရုံကြီးရှစ်ခု၏ စွန့်ပစ် ရေများတွင် လူကို အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေသော အာဆင်းနစ် အပြင် သတ္တုဓာတ်များစွာ ပါဝင်နေကြောင်း ခိုင်မာသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသန စာတမ်းတစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ သုတေသန စာတမ်းအရ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်မှ စက်ရုံကြီး ရှစ်ခု၏ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း၊ စွန့်ပစ်ရေ များကို Atonic Absorption Sbectroseopy စက်ဖြင့် တိုင်းတာရာတွင် ဘက်ထရီ စက်ရုံကြီး အနီးရှိ စွန့်ပစ်ရေ၌
အာဆင်းနစ် အများဆုံး ပါဝင်မှုမှာ ၆.၈၅၆ PPN ဖြစ်ပြီး အခြားစက်ရုံကြီး ၇ခု အနီးတဝိုက်တွင် ၆.၀၈၀ PPN ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အခြားသတ္တုဓာတ်များ ဖြစ်သည့် ခဲ၊ ပြဒါး၊
ကြေးနီ နှင့် ဓာတုဒြပ်စင် များကိုလည်း နွေ၊မိုး၊ဆောင်း အလိုက် စွန့်ပစ်ရေများကို ပုံမှန်တိုင်းတာ နေရာတွင် ပါဝင်မှု ပမာဏမှာ အဆတိုး နေကြောင်း ယင်း စာတမ်းအရ သိရသည်။
“သုတေသန ပြုလုပ်ဖို့ရေကို စက်ရုံတွေက တိုက်ရိုက် စွန့်ပစ်တဲ့ရေကို ခွင့်မပြုတဲ့ အတွက် စက်ရုံ ပတ်ဝန်းကျင်နားက ရေတွေကိုယူပြီး စမ်းသပ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီ အဖြေတွေရဖို့ သုံးနှစ်လောက် ကြာပါတယ်””ဟု ယင်း စာတမ်းပြုစုသူက ဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၁ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်း ကလည်း လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်မှ စွန့်ပစ်သော ရေများတွင် လူကို အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယား ပါဝင်မှုနှုန်းကို စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး အကျိုးပြု ဇီဝကောင်ဖြစ်သော EM ဖြင့် သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းထုတ် အပတ်စဉ် ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။
လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်ရှိ စက်မှုဇုန်များမှ စွန့်ပစ်ရေများကို စနစ်တကျ စွန့်ထုတ်ရန် နည်းစနစ်ကောင်းများ လိုအပ်လျှက်ရှိပြီး လက်ရှိ အနေအထားတွင် လှိုင်မြစ် အတွင်းသို့ ဓာတုဓာတ် စစ်ထုတ်မှု လျော့နည်းစွာ
စွန့်ပစ်လျှက်ရှိကြောင်း သုတေသန ပြုစုသူတို့က တူညီစွာ ပြောဆိုနေကြသည်။
US Special Representative On Myanmar Tour Seeking Reforms, Reconciliation
(RTTNews) – The U.S. Special Representative and Policy Coordinator for Myanmar, Ambassador Derek Mitchell will depart on his first trip to the South-East Asian country in his position on Wednesday. During his trip, he looks forward to meeting withafull spectrum of Myanmar society, including government officials, members of political parties, local civil society organizations, and others.
His trip is intended to build upon U.S. dialogue and engagement toward shared goals of genuine reform, reconciliation, and development for the Burmese people, US State Department said inastatement.
Ambassador Mitchell will attend meetings in Nay Pyi Taw on September9and10. He will continue consultations in Rangoon during September 10-14.
From Myanmar, he will leave for Thailand and Indonesia. He will consult with officials in Bangkok on September 14-15, and in Jakarta on September 16-17.
အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် စတင်
အေးလဲ့ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အမေရိကန် အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် မူဝါဒညှိနှိုင်းရေးမှူးမစ္စတာ ဒဲရက်ခ် ဂျေ မစ်ချဲလ် (Derek J. Mitchell) ၏ ပထမအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ တပတ်ကြာ ခရီးစဉ် အတွက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာန၏ အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် “စစ်မှန်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် မြန်မာလူထု၏ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု ဟူသော တူမျှစွာ လက်ခံထားသည့် ပန်းတိုင်များသို့ရောက်စေရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနှင့် ထိတွေ့မှုများ ဆောင်ရွက်သွားမည်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသည် သံအမတ်ကြီး အဆင့်ရှိသည်ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ကြေငြာထားသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မြန်မာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းသည့်နောက် အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံ
ရှိ သံအမတ်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး သံတမန် ဆက်ဆံရေးကို အဆင့်
ထုတ်ကုန်လိုင်စင်များနှင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်အချို့ (ဆေးဝါး နှင့် CMP) တို့ကို နေပြည်တော် တက်စရာမလိုပဲ ဟိုး ယခင်ကကဲ့သို့ပင် ရန်ကုန်တွင် လျှောက်ထားနိုင်တော့မည်ဟု သိရှိရပါသည်။
မြန်မာမိန်းကလေးများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက် – ထွန်းအောင်ကျော်
စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ထုတ် ယူကေမှ Telegraph အွန်လိုင်းသတင်းစာတွင် ရွှေလီမြို့မှနေ၍ ဒေးဗစ်အီ မာ (David Eimer) ဆိုသူ ရေးသားလိုက်သည့် “မြန်မာမိန်းကလေးများ တရုတ်သတို့သမီးများအဖြစ် အတင်း အကျပ် စေခိုင်းခံရခြင်း” (Burma’s women forced to be Chinese Brides) အမည်နှင့် သတင်းဆောင်းပါး တပုဒ်ကို ဖတ်ရှုလိုက်ရပါသည်။
သူ့ဆောင်းပါးအတိုချုပ်ကိုကောက်ရလျှင် တရုတ်ပြည်ကြီး၏ ‘ကလေးတယောက်’ ပေါ်လစီအရ တရုတ်မိသား စုများ ကလေးတယောက် ရပြီးလျှင် သားကြောကို ဆရာဝန်မှ အလိုအလျောက် ဖြတ်ပြီးဖြစ်သဖြင့် တရုတ်မိ သားစုများ မိန်းကလေးထက် ယောက်ျားလေးကိုသာ ရအောင် ကြိုးစားယူကြသဖြင့် ယောက်ျားဦးရေနှင့် မိန်း မဦးရေ အချိုးအစားကွာဟမှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအရ ယောက်ျားလေး ၁၂၀ ဖွားမြင်တိုင်း မိန်းကလေး ၁၀၀ ခန့်သာ ဖွားမြင်သည့်အတွက် တရုတ်လူမှုရေးသိပ္ပံအကယ်ဒမီမှ ထုတ်ပြန်သည့် ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ယောက်ျား ၂၄ သန်းတို့အတွက် လက်ထပ်ယူနိုင်မည့် မယားမရှိဟူ၍ဖြစ်သည်။
တရုတ်၏ ထို “ကလေးတယောက်ပေါ်လစီ” အရ ယောက်ျားမိန်းမ အချိုးအစားမညီမျှမှုကြောင့် မိန်းမရှားပါး မှုဒဏ်ကို တရုတ်နိုင်ငံ ခံစားနေရသည်။ ထိုလိုအပ်ချက်ကို တရားဝင် စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းဖြင့် လက်ထပ် ယူနိုင်သောသူများ ရှိသော်လည်း ထိုနည်းလမ်းဖြင့် မရနိုင်သူများက တရားဥပဒေဘောင်အပြင်မှ နည်းလမ်း များကို အသုံးချလာကြသည်ဟု ယူနက်စကို ဘန်ကောက်ရုံးမှ HIV/ AIDS နှင့် လူကုန်ကူးမှု ပပျောက်ရေး တာဝန်ခံ ဒေးဗစ်ဖင်းဂိုးလ် (David Feingold) က ဆိုသည်။
သူသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့သော မိန်းမရောင်းဝယ်ရေးအကြောင်း ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဒါရိုက်တာဖြစ် သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် သတို့သမီး (မယား) အဖြစ် အတင်းအကျပ် လုပ်ခိုင်းခြင်းခံရသူ မိန်းကလေးအများစု လာရာနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု သူကဆိုသည်။
ဒေးဗစ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလည်းဖြစ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်နေသူများလည်းဖြစ်သော၊ ဂေါက်သီး ရိုက်ရာတွင်လည်း အလွန်ဝါသနာထုံသော ခပ်ကြောင်ကြောင် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အ မျိုးသမီးများ တရုတ်နိုင်ငံသို့ အရောင်းစားခံရခြင်း၏ အဓိကတရားခံများအဖြစ် ထောက်ပြခဲ့သည်။
လွန်မင်းစွာ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုကြောင့် ပြည်သူများ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးလာပြီး စီးပွားရေးလွန်မင်းစွာ နိမ့်ကျလာမှု ကြောင့် မြန်မာမိန်းကလေးများ လူအရောင်းအဝယ်ပွဲစားများ၏ ဈေးကွက်တွင်းသို့ ကျရောက်လာရသည်ဟု ထောက်ပြခဲ့သည်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အစစအရာရာ နိမ့်ကျမှုကြောင့် ကုန်ထုတ် လုပ်မှု ကျဆင်းလာပြီး အစာရေစာရှားပါး ပြတ်လတ်မှုကိုပါ ကြုံတွေ့လာရသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုး သမီးများ အစာရေစာရှာရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ မိသားစုထောက်ပံ့ရန်အတွက်လည်းကောင်း တရုတ်နိုင်ငံ သို့ ထွက်ကြသည့်အခါ လူပွဲစားများ၊ ပြန်ပေးသမားများလက်တွင်းသို့ သက်ဆင်းကြရကြောင်း ဆိုသည်။ မြန် မာပြည်မှ အမျိုးသမီးအများစုမှာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးသူများ၏ ပို့ခြင်းခံရပြီးနောက် အတင်းအကျပ် မ ယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းခံရခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်သွားကြရသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
တရုတ်ပြည်တွင် ခိုးသွင်းလာသော အမျိုးသမီးတယောက်၏ တန်ဘိုးသည် ယွမ် ၆၀၀၀ နှင့် ၄၀,၀၀၀ အထိ ရှိပြီး သူမ၏ အချိုးအစား၊ အသက်၊ အသားအရည်၊ မျက်နှာသွင်ပြင်ကောင်းလျှင် ကောင်းသလောက် ဈေးပေး ခံရသည်။ စတာလင်ပေါင်နှင့် ၅၆၀ မှ ပေါင် ၃၇၅၀ အထိ ဈေးပေါက်သည်။
ယိုးဒယားအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရောင်းစားခံရသော မြန်မာမိန်းခလေးများ၏ ၂၅% သည် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ “ယောက်ျားတွေက သူတို့အတွက် ကလေးမွေး ပေးနိုင်မယ့် ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး အသက်အရွယ်ငယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ လိုလားသည်” ဟု ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ ကဝပ် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဂျူလီယာမရစ်က ဆိုသည်။
“မိန်းကလေးတွေကို ကလေးမွေးပေးဖို့ စက်တခုလိုပဲ သဘောထားကြတယ်” ဟု သူမက မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါ သည်။
ဤဆောင်းပါးအစကို မြန်မာပြည်မှ ၁၂ နှစ်သမီးအရွယ်တွင် ပြန်ပေးဆွဲခံရသည့် ကလေးမ “အပ” (တိုင်းရင်း သူဖြစ်ပုံရသည်) နှင့်စပြီး ၎င်းကို တရုတ်မိသားစုတစုထံတွင် ပြန်ပေးဆွဲသူများက ရောင်းစားခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ အသက် ၂၀ အရွယ် သားနှင့် ပေးစားရန် ကြံစည်ခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံး ၃ နှစ်အကြာ တရုတ်ပုလိပ်များက မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးသည့်အခါတွင် သူမသည် နိုင်ငံခြားသူဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်သွားပြီး မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ခွင့် ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဆုံးသတ်ထားသည်။ မြန်မာမိန်းကလေးများကို ဈေးလယ်တွင် ဝတ်ကောင်းစားလှများ ကို ဝတ်ဆင်စေပြီး မိတ်ကပ်ခြယ်သလျက် ဗြောင်လေလံတင် ရောင်းချသည့် နေရာများလည်းရှိကြောင်း ထို ဆောင်းပါးတွင် ရေးသားထားသဖြင့် တုန်လှုပ်ချောက်ခြားစရာ သူတို့ဘဝကို ကိုယ်ချင်းစာမိခဲ့ပါသည်။ ၂၁ ရာ စု ခေတ်မီတိုးတက်နေသော လူ့သမိုင်းသည် တပတ်လည်၍ ကျွန်ရောင်းကျွန်ဝယ်စနစ်ဆီသို့ ပြန်ရောက်နေပြီ လားဟု မေးခွန်းထုတ်ရတော့မလို ဖြစ်နေပါသည်။
နိဂုံးအားဖြင့် ချုပ်၍ပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှနိုင်ငံများကြားတွင် လွတ်လပ်ရေး ရခါစမှ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတိုင်မီအထိ အရှေ့တောင်အာရှ၏ ကြယ်တပွင့်၊ အာရှတိုက်၏ စပါးကျည် ဝမ်းဗိုက်ဟု တင်စားခေါ်ခံရသည့် ဆန်စပါးအထွက်ဆုံးနိုင်ငံဘဝ။ အိမ်နီးးချင်းနိုင်ငံများ၏ အားကျလေးစားလောက်သော အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ် ပညာတတ်များ မွေးထုတ်ရာ ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ကြီး ရှိသည့် အရှိန်အဟုန်ကြီးခဲ့သော နိုင်ငံဘဝမှ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဘဝသို့ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ကျရောက်သွားခဲ့ရခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ ယနေ့အထိ ကမ္ဘာက ဖိနှိပ်မှု အပြင်းထန်ဆုံး၊ လူ့အခွင့်အရေးအချိုးဖောက်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် အပြစ်တင်ခံနေရသည်မှာ စစ် အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခင်က ယိုဒယားနိုင်ငံကို မြန်မာပြည်သားများက “ဖာနိုင်ငံကြီး” ဟူ၍ အ ထင်သေး အမြင်သေး ရှုတ်ချကြသည်။ ယနေ့ အိမ်နီးချင်း ယိုးဒယားနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကုလားပြည်တို့တွင်ရှိ သော ဖာများသည် မြန်မာအမျိုးသမီးအများစုဖြစ်သလို မြန်မာပြည်တွင်း၌လည်း တရားမဝင် ဖာများ သောင်း နှင့်ချီ၍ မြို့နယ်တိုင်းအလိုက် အနှိပ်ခန်းများ၊ ကာယာအိုကေ၊ နိုက်ကလပ်များတွင် ရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။ အာ ဏာရူးစစ်ဗိုလ်များ၏ အတ္တစွဲကြီးမားလွန်းမှုကြောင့် ဖာနိုင်ငံဘဝသို့ ရောက်နေခြင်းကို မြန်မာပြည်ရှိ မည်သူ ကမျှ မတားဆီးနိုင်ပါ။
တရုတ်ပြည်၏ မယားလိုအပ်မှုအရ ရောင်းစားခံရသော မိန်းကလေးများတွင် လူချမ်းသာပညာတတ် တရုတ် များ၏ မယားဖြစ်ဖို့ထက် တရုတ်လယ်သမားများ၏ အဖြည့်ခံ အလုပ်ကျွန်မယားဖြစ်ဖို့က များပါသည်။ ထိုမိန်း ကလေးများသည် ထိုသူ၏ သွေးသားဖြည့်ဆည်းပေးရာ မယားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မိမိကာမကို ဝယ်ယူထား သူ၏ မိဘဖြစ်သူ၏ အစေခံအဖြစ်လည်းကောင်း အလုပ်အကျွေးပြုရင်း အနှိပ်စက်ခံပြီး နေထိုင်ရသည်။ မိမိ ဘယ်နေရာရောက်နေသည်၊ ဘယ်သူ့ကို အကူအညီတောင်းရမည်ကို မသိကြချေ။ တရုတ်မိသားစု၏ အိမ် ကျွန်လုပ်ရင်း လွတ်လမ်းမမြင်သည့်အခါ မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားတတ်ကြသည်။ လယ်ယာသုံး ပိုး သတ်ဆေးသောက်၍ အဆုံးစီရင်ခြင်းကို အများဆုံး အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကြေကွဲစွာ ဘဝအဆုံးသတ်သွားကြရ သည်။
တရုတ်ပြည်သည် မြန်မာပြည်ကို လူမျိုးအရ ဝါးမြိုမည်ဆိုသည်မှာ စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်ချေ။ မြန်မာပြည်ရှိ ဝ နယ်မြေ၊ ကချင်နယ်မြေ၊ ရှမ်းနယ်မြေတို့တွင် တရုတ်ပြည်မှ တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလာသူများ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက် ပိုင်းသက်သက်အနေနှင့်ပင် သန်းချီ၍ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် တရုတ်ပြည်၏ မိန်းကလေးလိုအပ်ချက်သည် တနှစ်ထက်တနှစ် တိုးပွားများပြားလာမည်မှာ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲဖြစ်သည်။ ထိုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည့်အဓိကနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်နေပြန်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံကို မှီခိုနေရသည့်အဆင့်သို့ တရွေ့ရွေ့ ကျရောက် လျက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
(၁) တရုတ်ကို အားကိုး၍ ကုလသမဂ္ဂမှ အရေးယူမခံရအောင် တရုတ်အလိုကျ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ တည်ဆောက်ရေးကို ပြည်သူများ တားနေသည့်ကြားမှ အတင်းအကျပ် လုပ်ဆောင်ရန် စိုင်းပြင်းလျက်ရှိခြင်း။
(၂) ဆင်းရဲမွဲတေနေသောနိုင်ငံဖြစ်သဖြင့် မိမိထက်ချမ်းသာသော တရုတ်နိုင်ငံက သစ်လိုလျှင် သစ်၊ ကျောက် လိုလျှင် ကျောက်၊ ဓာတ်ငွေ့လိုလျှင် ဓာတ်ငွေ့၊ နောက်ဆုံး မိန်းမလိုလျှင် မိန်းမပေးကို ပေးရတော့မည့် အနေ အထားဖြစ်သည်။
လာမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် လူပျိုလူလွတ် တရုတ်ယောက်ျား ၂၄ သန်းသည် ၎င်းတို့၏ သွေးသားကာမ ဖြေ ဖျောက်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ မျိုးပွားရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ဈေးချိုချိုနှင့်ရနိုင်သော မြန်မာပြည်မှ အ မျိုးသမီးလေးများကို ဦးလှည့်လာပေလိမ့်မည်။ လူပွဲစားများအတွက် အလွန်ကြီးမားသော “သတိုးသမီးဈေး ကွက်” သည် တားဆီးနေသည့်ကြားမှ မလွဲမသွေ ပိုမိုကြီးမားလာမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပင် ဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်ကြီးတွင် ပြည့်တန်ဆာများကို အစိုးရမှ တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင်ဖြစ်စေ ရပ်ကွက်ဖွင့်၍တိုးပွား လာသော လူလွတ်ယောက်ျားများ အာသာဆန္ဒကို မပေါက်ကွဲစေရန် ထိန်းချုပ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ကောင်းလုပ် ဆောင်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ထိုသို့လုပ်လာပါက ယိုးဒယားနိုင်ငံတွင် မြန်မာတိုင်းရင်းသူများအများစု ‘ဖာ’ ဖြစ် နေသည့်နည်းတူ ၎င်းတရုတ်ဖာခန်းများတွင်လည်း မြန်မာအမျိုးသမီးများသာ အများစုအဖြစ် တွေ့မြင်ရနိုင် ဖွယ်ရှိပေသည်။
ထိုအဖြစ်ကို ကာကွယ်ရန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်၏ အမှီအခိုကင်းသောနိုင်ငံဖြစ်ရန် လိုအပ်ပေသည်။ ဒီ မိုကရေစီနည်းကျ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် မထူထောင်နိုင်လျှင် စစ်ကျွန်ဘဝမှနေ၍ တိုင်းတပါး အိမ်နီးချင်း တရုတ်ကျွန်ဖြစ်ရန် လက်တကမ်းသာလိုတော့ကြောင်း မျိုးချစ်မြန်မာများ၊ အထူးသဖြင့် တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ် ရှိသော တပ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်၊ အကြပ်တပ်သားများကို သတိပေးနှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။ ယနေ့မြန်မာပြည်ကြီး ကို ကယ်တင်ရန် မျိုးချစ်စိတ်ရှိသော ဗိုလ်ချုပ်၊ ဗိုလ်မှူး၊ ဗိုလ်ကြီး၊ အကြပ်တပ်သားများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိဖို့ အ ထူးလိုပါသည်။ ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့နိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ပြည့်တန်ဆာဟု မသုံးဘဲ ‘ဖာ’ ဟု သုံးနှုန်းရခြင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်းအရ “ဖာသည်နိုင်ငံကြီး ဖြစ်သွားမှာပဲ” ဆိုသည့်စကားကို အမှတ်ရစေလို၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဖာနိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင် ဘယ်သူတွေက လုပ်နေကြသနည်း။
အသုံးချခံရမည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မမှု – ဧရာဝတီ Friday, 09 September 2011 16:39 .
မြန်မာအစိုးရ၏ အသုံးချမှုကိုခံနေရခြင်း မရှိကြောင်း ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်ဟု လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ (RFA) ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ကြာသပတေးနေ့က ဖော်ပြထားသည်။
မကြာသေးမီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အစိုးရခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံကြပြီးနောက်ပိုင်း သိသာထင်ရှားသည့် ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်မလာသေးသဖြင့် ထိုသို့သုံးသပ်နေကြချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တုံ့ပြန်ချက် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
“အသုံးချခံနေရတယ်လို့ မမြင်ပါဘူး၊ ပူးတွဲပြီးတော့ လုပ်ဆောင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်” ဟု RFA ပရိသတ်များနှင့် အမေးအဖြေ ကဏ္ဍတခုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်သည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖိအားပေးမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့်အစိုးရ၏ အသုံးချခံ ဖြစ်သွားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ခြင်း မရှိဟု ဆိုသည်။
“တကယ်ပဲ အသုံးချခံရတယ် ဆိုရင်တောင်မှ တိုင်းပြည် အတွက် အသုံးချခံရတယ်ဆိုရင် မနှစ်မြို့စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး၊ ယုံကြည်ချက်အတွက် ဆက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် သစ္စာဖောက်မည် မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း မိတ္ထီလာခရိုင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေး ကော်မတီဝင် ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“လမ်းကြောင်းမှန် ပေါ်လာအောင် တီထွင် ကြံဆပြီး လုပ်နေတဲ့ဟာကို ကျမတို့က ထောက်ခံပြီးတော့ အတိုင်းအတာ တခုအထိ ပံ့ပိုးပေးသွားရမယ်” ဟု ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ လ အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ အလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့နှင့် တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးမှုအကြောင်းအရာ အသေးစိတ် နှင့် သဘောတူညီချက်များကို နှစ်ဘက်စလုံးက ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။
( “တကယ်ပဲ အသုံးချခံရတယ် ဆိုရင်တောင်မှ တိုင်းပြည် အတွက် အသုံးချခံရတယ်ဆိုရင် မနှစ်မြို့စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး၊ ယုံကြည်ချက်အတွက် ဆက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” )
ဒီစကားစုလေးက ကျုပ်အတွက်တော့ ဟတ်ထိတယ်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ရွာသားများသည် ထူးထူးခြားခြား ကြီးမားလှသည့်
မိကျောင်းကြီး တစ်ကောင်ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
APသတင်းဌာနက ယခင်က အကြီးဆုံးတွေ့ရှိရသည့် မိကျောင်းဟု ယူဆရသည့် (၅.၅)မီတာ
အရှည်ရှိသော ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ကဲန်စ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည့် သတ္တ၀ါကြီးထက်
ယခုမိကျောင်းထီးကြီးက ပိုမိုကြီးမားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယခုဖမ်းဆီးရမိသော တွားသွားသတ္တ၀ါကြီးသည် အရှည်(၆.၆)မီတာရှိကာ
ကိုယ်အလေးချိန် (၆၀၀)ကီလိုဂရမ်မျှ ရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ယခင်က
ဩစတြေးလျတွင် ဖမ်းမိခဲ့သော မိကျောင်းကြီးသည် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း စာအုပ်တွင်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မိကျောင်းအဖြစ် စာရင်းသွင်း ဖော်ပြခံထားရပြီး
ယခုဖိလစ်ပိုင် မိကျောင်းက စံချိန်ချိုးဖွယ် ရှိနေသည်။
ထိုမိကျောင်းကြီးကို ဖိလစ်ပိုင်ရှိ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥယျာဉ်သို့
ပို့ဆောင်ထားရှိရန် စီစဉ်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဘူနာဝမ် မြို့တော်ဝန် ကော့စ်အီလိုဒီက ယင်းမိကျောင်းကြီးသည် လူတစ်ဦးကို
တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများ ရှိထားပြီး
ဇူလိုင်လအတွင်းက ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် တံငါသည် တစ်ဦးကိုလည်း
စားသောက်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ အီလိုဒီက ကြီးမားလှသော
မိကျောင်းကြီးကို ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအား ဆွဲဆောင်နိုင်ရေး
အသုံးပြုခြင်းသည် ခြိမ်းခြောက်နေသည့် အရာတစ်ခုကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်
ဘူနာဝမ်နှင့် အက်ဂ်ဆန်ဒယ်လ်ဆာတို့ အနီးတွင် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော
ရွာသားများက (၃)ပတ်ကြာ ခြေရာခံ ရှာဖွေမှု ပြုလုပ်ပြီးနောက်
ယင်းမိကျောင်းကြီးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်း အီလိုဒီက
(AP) WASHINGTON — The Census Bureau reports the number of Americans in poverty jumped to 15.1 percent in 2010,a27-year high.
အဲဒါကတော့ သူဌေး ဆူးစူးလို့ အော်တာမျိုးထင်ပါရဲ့။
US မှာ မွဲတယ်ဆိုတဲ့ poverty point အမှတ်က တနှစ်ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲဆိုတာ ဗဟုသုတအဖြစ်ပြောပေးပါဦး။
အလတ်စား ၀င်ငွေက တနှစ်ငါးသောင်းဆိုရင် မြန်မာငွေနဲ့ဆို လေးရာလျော့လျော့လောက်ဆိုတော့ သိပ်တော့မများလှဘူးပဲ။
အဲဒါထက် ဆယ်ဆလောက်ဝင်တဲ့သူ တချို့ အိုးပစ်အိမ်ပစ်နဲ့ US သွားနေနိုင်ဘို့ အလုအယက် ကြိုးစားတာထောက်ရင် ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ဘယ်လောက်နေချင်စရာ မကောင်းလဲဆိုတာ ပေါ်လွင်တယ်။
Forafamily of four with two children, poverty means making less than $22,113ayear. The U.S. poverty threshold is $11,344 forasingle adult younger than
65, and advocates have long pointed out that an income at that level amounts to even less for residents of the Bay Area, with its high cost of living.
Dear Parlayar 46,
“တနှစ်ငါးသောင်းဆိုရင် မြန်မာငွေနဲ့ဆို လေးရာလျော့လျော့လောက်ဆိုတော့”
not ” လေးရာလျော့လျော့လောက် ”
” 4120 US$/month “
အင်္ဂါ, 13 စက်တင်ဘာ 2011
TIFF 2011: No love for Aung San Suu Kyi biopic The Lady
September 12, 2011. 11:17 pm • Section: The Cine Files
“A simplistic script is marred by leaden dialogue and odd choices about when to use English or Burmese; performances by Michelle Yeoh and David Thewlis are as two-dimensional as the writing.”
Britain’s The Guardian says:
“The Lady says so little about its subject, it would struggle to pass muster asaTV biopic.
“The dialogue is flat, the performances creaky and, in the wake of George Clooney’s much more sophisticated The Ides of March, its depiction of the political world borders on cartoonish. . .
“This should beadynamic film aboutadynamic couple; instead, it might as well be titled Aung San Suu Kyi: Housewife Superstar.”
I find this hard to imagine, but The Guardian also says that The Lady is worse than Madonna’s movie W.E.
“Presumably, (director Luc) Besson responded to something in the story that prompted him to step outside his comfort zone, but exactly what that was is unclear in this well-intentioned but pedestrian retelling ofastirring true story.
“Prime weakness is British filmmaker/novelist Rebecca Frayn’s by-the-numbers screenplay. With wooden dialogue and little sense of narrative economy, the overlong film trudges through decades of turbulent recent history via an approach that’s part old-fashioned miniseries and part simplistic after-school special.”
“. . . Yeoh radiates regality, poise, compassion and quiet conviction, but never generates much ofacharge. As if taking her cue from the film’s generic title, hers isastiff, somewhat remote performance that never quite measures up to descriptions of Suu Kyi as “the female Mandela” or “the steel orchid.”
While I’m expressing disappointment, I’d also like to say that it’s really annoying to see Michelle Yeoh constantly referred to asa“Bond Girl,” just because she was in the movie Tomorrow Never Dies.
She’s been in dozens of films, inacareer stretching back to the 1980s.
Khonumthung News Group » KNG News, တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း » ‘‘တက်စရာ ရုံးမရှိဘူး’’ ချင်းလွှတ်တော်အမတ် နှင့် အင်တာဗျူး
September 14th, 2011 | AddaComment | 849 views
ယခုနှစ်ကုန်တွင် အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းသစ်များ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာမည်
မြ၀တီရုပ်မြင်သံကြားသည် ဒစ်ဂျစ် တယ်စနစ်ဖြင့် အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်း ခုနစ် လိုင်းကို ယခုနှစ်ကုန်မှစတင်ခါ ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန် စီစဉ်နေ ကြောင်းနှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရွှေသံလွင်မီဒီယာက တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်မည့် အခမဲ့ရုပ်သံ လိုင်းသစ် mn tv (Myanmar National TV) ကို ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော်၊ တောင်ညိုမြို့ရှိ မြ၀တီ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ရုံမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည့် အဆိုပါလိုင်းများကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် မြ၀တီ(၂) ဟု အမည်ပေးကာ ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဟု အဆိုပါလိုင်းများအတွက် ပြင်ဆင်နေသည့် ကုမ္ပဏီများထဲ မှ မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြော ကြားသည်။
နိုဝင်ဘာလထဲတွင် စမ်းသပ်ထုတ် လွှင့်ရန် စီစဉ်နေသည့် အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းများကို ထပ်ဆင့်ရုပ်သံလွှင့်စက်ရုံ များမှတစ်ဆင့် ယခုလက်ရှိ မြ၀တီရုပ်မြင် သံကြားမှ ထုတ်လွှင့်နေသည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဧရိယာ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်လိမ့်မည် ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မြ၀တီရုပ်သံသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ထုတ်လွှင့်ရန်စီစဉ်ထားသည့်လိုင်းများမှာ မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားနှင့် နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားများ ပြသမည့်လိုင်း၊ အားကစား၊ ဂီတနှင့် ကာတွန်းများ တွဲစပ်ထားသည့်လိုင်း၊ documentary နှင့် ပြည်တွင်းအစီအစဉ်များလိုင်း၊ နိုင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းတွဲ သီးသန့်လိုင်း၊ လက်ရှိပြသ နေသည့် မြ၀တီလိုင်းကဲ့သို့ အစီအစဉ် အစုံအလင်ပါဝင်မည့်လိုင်းများဖြစ်ပြီး ကျန်သည့်လိုင်းနှစ်ခုအတွက် စီစဉ်နေဆဲ ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“ဒီလိုင်းတွေကို ဖမ်းကြည့်ဖို့အတွက် receiver လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ Set Top Box လို့ ခေါ်တယ်။ နောက် UHF အင်တီနာ လိုတယ်။ ဒါက လည်း MRTV-4 စမိတ်ဆက်တုန်းက အဲဒါနဲ့ဖမ်းရတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အင်တီနာတွေကလည်း 3-in-1 လာတာ ဆိုတော့ ပြဿနာမရှိလောက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် Set Top Box တော့ ၀ယ်ရမှာပေါ့” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ Set Top Box များကို မြန်မာ့ စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်မှ ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး တစ်လုံးလျှင် ကျပ် ၂၇,၀၀၀ ခန့်ဖြင့် ရောင်းချရန် လျာထားသည်ဟု သိရသည်။
အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းများ တိုးပွားလာသည့်အတွက် ရုပ်သံလုပ်ငန်းတွင် ပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက်မှုရရန် လက်ရှိ ရုပ်သံလိုင်းများနှင့် အကြိတ်အနယ် ယှဉ် ပြိုင်ရဖွယ်ရှိသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ရွှေသံလွင်မှထုတ်လွှင့်မည့် mn tv အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီ၏ Free-to-air ဌာနမှ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးဇော်သက်မောင်က “စလွှင့်လွှင့်ချင်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လွှင့်တာမျိုးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မလွှင့်ဖြစ်သေးရင် မြို့ကြီးတွေကို အရင်လွှင့်ပါမယ်။ ၂၄ နာရီ လုံး ထုတ်လွှင့်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် စစချင်းမှာတော့ အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့ပဲ ပြသမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဖျော်ဖြေရေးကို အဓိကထားသည့် Infotainment အစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်ရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး အစီအစဉ်များကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ဆက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟုလည်း သိရသည်။
အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းသစ်များ ထွက် ပေါ်လာပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား၊ မြ၀တီရုပ်မြင်သံကြား၊ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေသည့် MRTV-4 နှင့် Myanmar International စသည့် ရုပ်သံလိုင်းများ အပါအ၀င် အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ရုပ်သံလိုင်း ၁၀ ခုကျော် ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
ရုပ်သံလိုင်းများအတွက် ကြော်ငြာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် Multimedia Group Ltd မှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးကျော်ဆန်း က အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းသစ်များ ထွက်ပေါ်လာပါက ရုပ်သံလိုင်းများတွင် ကြော်ငြာ ရရှိရန်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုများ ပိုမိုများ လာနိုင်ပြီး အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွင် ကြော်ငြာရရှိမှုနှုန်းထား ကျဆင်းလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု သုံးသပ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အဓမ္မထိမ်းမြားရန် ရောင်းစားခံရပြီး ပြန်လည် ထွက်ပြေးလာသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးထံမှ ရရှိသည့် ဖုန်းနံပါတ်များမှ တစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် ကိုးနှစ်အရွယ် သမီးငယ်အား ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်းက တရုတ်နိုင်ငံတွင် အဓမ္မထိမ်းမြားရန် ရောင်းစားခံရပြီး ပြန်လည်ထွက်ပြေးလာသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးထံ မှရရှိသည့် ဖုန်းနံပါတ်များမှ တစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် ၎င်း၏ ကိုးနှစ်အရွယ်သမီးအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း က တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် မိန်းတိန်မြို့ (ချင်းရွှေဟော်နှင့် ဆက်စပ် သည့်မြို့) အနီး ပလောင်ရွာတွင်နေ ထိုင်သည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ဦးသာလျန်သည် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ် ပန်လုံအုပ်စု မန်ဆာရွာသို့ လာရောက်လည်ပတ်စဉ် မန်ဆာရွာမှ အမျိုးသမီး ၁၀ ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကြံခုတ်ပါက တစ်ရက်လျှင် စရိတ်ငြိမ်း ကျပ် ၅၀၀၀ ရရှိ မည်ဟုဆိုကာ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန်ဆာရွာနေ မ— နှင့် ၎င်း၏သမီးငယ်နှစ်ဦးတို့သည်လည်း ၎င်းတို့နှင့်အတူ နမ္မတူမှ လားရှိုး- ချင်းရွှေဟော်ထိ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပလောင် ရွာသို့ တရားမ၀င်လမ်းကြောင်းမှ ၀င် ရောက်ခဲ့ကြကာ ဦးသာလျန် အိမ်တွင် ငါးရက်ခန့်နေခဲ့ရကာ ကြံခုတ်လုပ်ကိုင်ရခြင်းမရှိဘဲ ခြောက်ရက်မြောက် နေ့တွင်အလုပ်ရှင်ဆိုသူတစ်ဦးရောက် လာ၍ ၎င်းနှင့် သမီးငယ်နှစ်ဦးအား ကျန်းစုပြည်နယ်၊ မိန်းဟော်မြို့ထိ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး မိန်းဟော်မြို့နယ်၊ ချင်လေချိန်ရွာနေ တရုတ်လူမျိုး ၀မ်ပေါင်းဝူး ဆိုသူထံ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၃၃၀၀၀ ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် မ— သည် ၀မ်ပေါင်းဝူးနှင့် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ရ ခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရရှိလာရာ မိမိတို့ဓလေ့အရ မိဘများထံ ကိုယ်ဝန် ရရှိကြောင်း ပြန်လည်ပြသရမည် ဖြစ်သည်ဟု ၀မ်ပေါင်းဝူးအား ယုံကြည်အောင်ပြောဆို၍ ခြောက်နှစ်အရွယ် သမီးငယ်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
လားရှိုး လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက် ရေးအထူးအဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသဖြင့် သူမအား လာရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခဲ့ရာ အဓမ္မထိမ်းမြားပေါင်းသင်းခဲ့သည့် ၀မ်ပေါင်းဝူး၏ လက်ကိုင်ဖုန်း နံပါတ်နှင့် လိုင်းဖုန်းနံပါတ်အပြင် နေရပ် လိပ်စာ အတိအကျကို သိရှိရသဖြင့် ချင်းရွှေဟော် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး အထူးအဖွဲ့သို့ အကူအညီ တောင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန် ပြည်နယ် ကိန်းမရဲစခန်းနှင့် မိန်းတိန် မြို့ရဲဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများမှ အဆိုပါ ကိုးနှစ်အရွယ် သမီးငယ်အား ကယ်တင်၍ ချင်းရွှေဟော် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အထူးအဖွဲ့တာဝန်ခံထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက် နေ့တွင် မိခင်ဖြစ်သူထံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ဥပဒေကြမ်းတင်ပြရန် စီစဉ်နေ
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး က “နိုင်ငံသားတို့၏ မူလအခွင့်အရေး နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သုံး နိုင်စေရန် လိုအပ်သည့် ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသစ် ပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်”ဟု မိန့်ကြားခဲ့ သည့်အတိုင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မီဒီယာဆိုင်ရာဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက် ခြင်း၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း စသည်များ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနှင့် သင့်လျော်သည့်အချိန်တွင် ‘စာပေစိစစ်ရေး’ဟူ၍ ရှိတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက ပြောသည်။
“ဒီလိုပြင်ဆင်တဲ့အခါ မီဒီယာလွတ် လပ်ခွင့်နဲ့ မီဒီယာသမားများ ရပိုင်ခွင့်တွေလည်း ပါအောင်၊ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားခြင်း မရှိအောင်၊ တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားတွေလည်းပါအောင်၊ ဥပဒေ တစ်ခုခု ကျူးလွန်ခဲ့ရင် ကျခံနိုင်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေလည်းပါအောင် စီစဉ် ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာ မီဒီယာကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းပါပဲ။ မီဒီယာဥပဒေကို ဒီလိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲ ရာမှာ အချို့သော ဥပဒေများကို ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ချက်များနဲ့အတူ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လလောက်ကတည်းက ရှေ့နေ ချုပ်ရုံးကို တင်ပြထားပါတယ်။ ရှေ့နေ ချုပ်ရုံးရဲ့ အကြံပြုချက်များကိုလည်း ရယူထားပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပထမ အကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန် အစည်း အဝေး ၁၃ ရက်မြောက်နေ့၌ လွှတ်တော်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၌ ပြုလုပ် သော ၎င်းအစည်းအဝေးတွင် “သတင်း မီဒီယာများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားဖြန့်ဝေခွင့် စသည့် အခွင့်အရေး များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေး သည့် ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်း ပေးပါရန်’ ဟူသည့် သင်္ဃန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်၏အဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်လေးဦးတို့က ဆွေး နွေးအပြီး၌ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးရာတွင် ပြည်သူ့လွှတ် တော်သို့ ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီနေ့အခါမှာ မီဒီယာလောက အားလုံးအတွက် လွတ်လပ်မှု၊ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန် ရှိမှုနဲ့ တာဝန်ယူမှုတွေကို ပူးတွဲပြီး အပြုသဘောနဲ့ ဝေဖန်ထောက် ပြ ရေးသားခွင့်တွေ ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း အလေ့အကျင့်မရှိသေး တဲ့အတွက် လွတ်လပ်မှုနဲ့ တာဝန်ယူမှု ဟာ ၀ိရောဓိသဘောတွေ ရှိနေဆဲပါပဲ။ မီဒီယာဥပဒေသစ် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်း နိုင်ခြင်းမပြုမီမှာလည်း မီဒီယာသမားတွေရဲ့ လွတ်လပ် ခွင့်တွေအတွက် ဖြေလျော့မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဤသို့ ကြိုတင်ဖြေလျှော့ခြင်းမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က မီဒီယာဆိုင် ရာ ဥပဒေများကို အတည်ပြုလိုက်ချိန် ၌ မီဒီယာသမားတို့၏ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် အဆင်သင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောကြားသည်။
သီပေါမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွန်းက ဦးသိန်းညွန့်၏အဆိုကို ထောက်ခံဆွေး နွေးရာ၌ “ဥပဒေများ၊ တရားရုံးများ ရှိနေ ပါလျက်နှင့် မီဒီယာအတွက် စာပေစိစစ် ရေး လိုအပ်ပါသေးသလား” ဟူသော စကားရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းက “စာပေ စိစစ်ရေးဆိုတာရှိဖို့ လိုပါသေးတယ်။ ရေးသားဖော်ပြမှု မှားယွင်းလို့ တရားရုံး မှာ ဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်ရရင် အချိန်ကြာမယ်၊ အလုပ်တွေပျက်မယ်၊ ဒါ့ပြင် တရား ဥပဒေက ချမှတ်လိုက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်က ပြင်းပါတယ်။ ထောင်ဒဏ်တွေ၊ ငွေဒဏ်တွေ ပါလာမယ်။ စာပေစိစစ်က ၀င်ပြီး ထိန်းပေးတဲ့အခါ တစ်ခါတလေ သတိ ပေးရုံနဲ့ ပြီးပါတယ်။ တစ်ခါတလေ နှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းပေးရုံနဲ့ ပြီးပါတယ်။ “ဒုတိယအချက်က ယနေ့ ဒီမိုကရေစီ ကို သွားကြရာမှာ မွေးစကလေးလေး အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကလေးလည်း လူပဲ၊ သူ့ဟာသူ စားလိမ့်မယ်၊ သူ့ဟာသူ ရေချိုးလိမ့်မယ်၊ သူ့ဟာသူ သွားလိမ့်မယ် ဆိုပြီး လွှတ်ထားလို့ မရပါဘူး။ ဒီသဘော အရ စာပေစိစစ်ရေးဟာ ရှိဖို့လိုပါတယ်။ သို့သော် ဒီမိုကရေစီသဘောအရ သင့် လျော်တဲ့အချိန်မှာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး လို့ ပြောလိုပါတယ်” ဟူ၍ ဖြည့်စွက် ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မီဒီယာဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်က အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းပြီးသည့်အခါ မီဒီယာသမားတို့အနေဖြင့် လွတ်လပ်မှုနှင့် တာဝန်သိမှု၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ လွတ်လပ် မှုနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားတို့ကို လက်ကိုင်ထားကာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ စည်းကမ်းရှိသော လွတ်လပ်မှု၊ ဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သော လွတ်လပ်မှုတို့ဖြင့် နိုင်ငံ နှင့် ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ရေးသား ဖြန့်ချိသွားကြစေလိုကြောင်း ဦးကျော်ဆန်းက တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
အသုံးမလိုတော့သည့် ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်သည့် အဟောင်းဈေးဆိုင်တန်း Flea Market လဟာပြင်ဈေး မြေကွက်လပ်နေရာတွင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည်
Tuesday, 13 September 2011 19:04
မိမိတို့၏ နေအိမ်၊ ရုံးခန်း အသီးသီးတွင် အသုံးမလိုတော့ သည့် ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် ရောင်းချနိုင်သည့် အဟောင်းဈေး ဆိုင်တန်း Flea Market ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ လဟာပြင်ဈေး မြေ ကွက်လပ်နေရာတွင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့် ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သတင်းရရှိသည်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အသုံးမလိုတော့သည့် ပစ္စည်းများ ကို ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်သည့် အဟောင်းဈေးကွက်တစ်ခု ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ၊ အ၀တ်အထည်များ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို လာရောက် ရောင်းချနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
အပတ်စဉ် စနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ပြီး နံနက် ၇ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
လာရောက် ရောင်းချလိုသူများ အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအမည်အလိုက် သတ်မှတ်နေရာတွင် ဦးရာ လူစနစ်ဖြင့် နေရာယူရောင်းချနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ဆိုင်နေရာတစ်နေရာကို ခြောက်ပေပတ်လည် သတ်မှတ်ထားသည်ဟု သိရသည်။
မိမိရောင်းချလိုသည့် ပစ္စည်းများ ကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ယူဆောင်လာ ရမည်ဖြစ်ပြီးရောင်းချပြီးပါကလည်း ဆိုင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး ကိုပြုလုပ်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချမည့် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကိုလည်းယူဆောင်လာ ရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အခမဲ့ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပြုသွား မည်ဖြစ်ပြီး အခြေအနေအရဌာနမှ အခွန်အခများ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအစီအစဉ်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး စတင်ဆောင် ရွက်သည့် Flea Market အဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာတွင် ခေတ်စားကျယ်ပြန့် မှုရှိ၍ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများ ပင်စိတ်ဝင်တစား လာရောက်လေ့ ရှိသော ဈေးများဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ နိုင်ငံတော်တော်များများရှိ မြို့ကြီးများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသကဲ့ သို့ ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
လမ်းဘေးဈေးသည်များအား မြေနေရာချထား ရောင်းချခွင့်ပေးခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ အသုံးမလိုပစ္စည်းများအား အသုံးလိုနိုင်သူများထံ ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်သည့် ဈေးကွက်တစ်ခု ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလအတွင်း တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted Thursday, September 15th, 2011 at 7:32 pm
မနေ့က(၂၀.၉.၂၀၁၁ရက်နေ့) ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကြောင့် စိတ်လည်းမကောင်း၊ခံလည်း ခံပြင်းတာကြောင့်ဒီ ပို့စ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်၊ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ၊မနေ့က ဗန်းမော်က ထွက်လာတဲ့ ခရီးသည်တင်ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ဟာ ရွှေကူ၊ကသာ၊ထီးချိုင့်တွေ ကျော်လာပြီး မောင်းကုန်းဆိုတဲ့ ရွာ ကိုရောက်ပါတယ်၊အဲဒီမှာ ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ပန်ကာပြုတ်ပြီးဧရာဝတီမြစ် ထဲက ရေစုတ်တင်နေတဲ့ရေပိုက်ခေါင်းတစ်ခုကို ၀င်တိုက်မိပါတယ်၊ရေပိုက်ခေါင်းကြီးဟာ ဘာမှ အပျက်အဆီး မရှိပေမယ် ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ရဲ့ နံရံတွေကတော့ ပိန့်ရှုံ့သွားပါတယ်၊အဲဒီအချိန်မှာ မောင်းကုန်းရွာထဲမှာရှိနေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေအများကြီး ထွက်လာပြီး ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ကိုပြသနာရှာပါတယ်၊အံ့သြစရာက ပြသနာလာရှာတဲ့တရုတ်တွေထဲမှာ တရုတ်ရဲ ယူနီဖေါင်းဝတ်ထားတဲ့သူတွေလည်း ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်၊နောက်ဆုံး ရှပ်ပြေးယာဉ်ပေါ် ခရီးသည်အဖြစ်ပါလာတဲ့ ခရိုင်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေက တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို သွားတောင်းပန်မှ ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ကိုဆက်လက် ထွက်ခွာခွင့်ပြုပါသတဲ့၊ဒါနဲ့ ဒီတရုတ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းလောက်အထိ ထုနဲ့ထည်နဲ့ ဘာကြောင့်ရောက်ရှိနေတာလဲလို့စုံစမ်းတော့ ဒီလိုပါတဲ့၊ကသာခရိုင် ထီးချိုင့်မြို့နယ် မောင်းကုန်းရွာမှာ တရုတ်တွေက သတ္တုရှာဖွေရေးအမည်ခံပြီး ကုမ္မဏီလာဖွင့်ပါသတဲ့၊တရုတ်ပေါင်းများစွာလည်းပါလာပြီး စက်ရုံဝင်းကြီး တစ်ဝင်းတည်ဆောက်ပါတယ်တဲ့၊စက်ရုံဝင်းကြီး ဘယ်လောက်ကျယ်သလဲဆိုတော့ ရွာခံတွေရဲ့လယ်မြေတွေကို အကုန်သိမ်းလိုက်တဲ့အထိ ကျယ်ပါသတဲ့၊ဒေသခံမြန်မာလယ်သမားတွေကို လျှော်ကြေးတစ်ဧက ၅သောင်းပဲပေးပြီး သိမ်းယူပါသတဲ့၊လယ်သမားတွေက မကျေနပ်လို့ တရုတ်လူကြီးတွေကို သွားတောင်းပန်တော့(မြန်မာနိုင်ငံရောက်တဲ့ တရုတ်တွေကို မြန်မာစစ်စစ်တွေက အသနားခံတာနော်.ရင်နာစရာဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ)ခင်ဗျားတိုကလယ်မြေတွေကို ၅သောင်းပေးတာတောင်ကျေးဇူးတင်ပါ၊အစိုးရက လယ်မြေတွေကိုပိုင်တာ ခင်ဗျားတို့လယ်ကို ခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူး၊အလကား မသိမ်းတာတောင်ကျေးဇူးတင် လို့ပြန်ပြောတယ်လို့ ရှပ်ပြေးပေါ်ပါလာတဲ့ မောင်းကုန်းရွာက ဒေသခံ လယ်သမားတစ်ဦးကပြောပါတယ်၊ပိုပြီး ရင်နာစရာကောင်းတာက အဲဒီ တရုတ်စက်ရုံဝင်းအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်က မြန်မာမိန်းကလေး ငယ်ငယ်နုနုလှလှရွရွတွေအများကြီးအလုပ်လုပ်နေကြတယ်တဲ့၊ဘာအလုပ်မှန်း မသိပေမယ့်တစ်လကို ၅သိန်းကနေ ၁၀သိန်းအထိပေးလို့.မန္တလေးကာရာအိုကေက ကလေးမလေးတွေတောင် စက်ရုံဝင်းထဲရောက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်တဲ့၊ရွာခံတွေအနေနဲ့ တရုတ်တွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုတွေလည်း ခံရတယ်တဲ့၊ဒီတော့ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကို အသက်ပေးချစ်တယ်ဆိုတဲ့လူကြီးမင်းများကို အသနားခံတောင်းပန်ပါရစေ၊မြန်မာလူထုရဲ့ဒီဒုက္ခတွေကို ကယ်တင်ပေးကြပါဦးလို့…
မြန်မာဇတ်ကားတွေမှာပါတတ်တဲ့ ကိုလိုနီခေတ်အခြေခံ ဇတ်ဝင်ခန်းမျိုးကို သတိရမိတယ်။ ချစ်တီးကုလားကြီးက ပုလိပ်တွေခေါ်လာပြီး ရွာသားတွေရဲ့ ကျွဲနွား လယ်ယာ သမီးကညာတွေ အတင်းသိမ်း အနိုင်ကျင့်တာမျိုးလေ…။
အခုလဲ ချစ်တီးတရုတ်ကြီးတွေ သူတို့ရဲ့ကိုလိုနီပုလိပ် သူတို့ရဲ့ကိုလိုနီစစ်သားတွေကိုခေါ်လာပြီး အနိုင်ကျင့်တာမျိုး မြန်မာများသာမက မြန်မာပြည်ပေါက် မြန်မာနိုင်ငံသား တရုတ်ကုလား လူမျိုးများပါမကျန် ခါးကော့အောင်ခံနေကြရပါပြီ။
မြန်မာများ တိုင်းရင်းသားညီအကိုများ အသိဝင် သတိဝင်ကြဘို့ လိုပါပြီ။ ဒါမျိုးဆန်ဆန်ကိစ္စတွေ ဒီ၂နှစ်၃နှစ်လောက်အတွင်းမှာ တော်တော်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
Ko Ko Aung ရေ.. မျက်စိထဲ မြင်မိလို့ သွားပြောလျှင်များ ကျွန်မတို့က ပုံတုန်းမို့လို့ သူတို့လို မစွန်ဘူးလေး ဘာလေးဖြစ်သေးတယ် … ဒီတော့လည်း … ပိုးဖလံမျိုး မီးကိုတိုးချင်တာပဲ သဘောနဲ့… မဆိုင်သလို ကြည့်နေလိုက်တော့တယ် .. ။
One of the very pillars of physics and Einstein’s theory of relativity – that nothing can go faster than the speed of light – was rocked Thursday by new findings from one of the world’s foremost laboratories.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့သံဃာ့အရေးအခင်း ၄ နှစ်ပြည့်နေ့ အဖြစ် ကျင်းပနေပြီး ဆန္ဒပြနေသည်ဟု သိရှိရ သည်။ ဆန္ဒပြသူများ မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာနေသည့်ခြားမှ အ၀ါရောင်အကျီ င်္တွေဆင်တူဝတ်၍ ဆူလေဘုရားကို ချီတက်လာနေကြပြီလို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာတော့ ရဲတွေ အမြောက်အများ တင်ကျပ်စွာ ချထားပါတယ်လို့သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့မှ လူအများ အနေဖြင့် ထိုသတင်း မှန်မှန် အတည်ပြုပေးကြပါလို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ဆန္ဒပြနေတယ် ဆိုတာ မှန်တယ်.. ရဲတွေချထားတာလည်းမှန်တယ်… ဘာကြောင့်ပြနေလဲ ဘာတောင်းဆိုနေလဲ မသေချာသေးဘူး အကို…
ဒေါ်နော်အုံးလှတို့ ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မှာ အခု ဆန္ဒပြနေပါတယ် လို့သတင်းရရှိပါတယ်။
မရမ်းကုန်းမြို့အ၀င်လမ်းဝန၀ဒေး ရုပ်ရှင်ရုံရှေ့မအရောက် ရဲက ပုဒ်မ ၄၄၆ တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူမယ်လို့ တုန့်ပြန်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကခြိမ်းခြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံကိစ္စဲ့ ရွှေဝါရောင်၎နှစ်ပြည့်လှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆရပါတယ်။အခုတံတားလေးလမ်းဆုံမိုးလေ၀သရောက်နေပြီ လို့သိရပါတယ်။
“အော်တာဟစ်တာမရှိပါဘူး ။ ငြိမ်ငြိမ်လေးဘဲရှိခိုးပြီးဆုတောင်းနေကြတယ်။ ဘာတွေဆုတောင်းလဲဆိုတာ ဝေးတော့ မကြားရဘူး”ဟု ထိုနေ
“ရဲတွေ၊လုံခြုံရေးတွေနဲ့ ရပ်ကွက်ကလူကြီးတွေက လူ၁၀၀လောက်ရှိတယ်။ လမ်းမပိတ်အောင် ယာဉ်ထိန်းကရှင်းပေးနေတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲက လမ်းကြားမှာတော့ လက်နက်အပြည့်နဲ့လုံခြုံရေးကားတစ်စင်းရပ်နေတာလှမ်းတွေ့ရတယ်” ဟု ထိုနေရာအနီးတွင်ရောက်ရှိနေသူတစ်ဦး ကပြောသည်။
လူ ၂၀၀ ခန့်ပါသော ဆန္ဒပြမှု တစ်ခုဖြစ်ပွား၊ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ပျက်ပြားစေသော အနှောက်အယှက် လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး လက်မခံကြောင်း သတင်းစာ ဆရာကြီးများနှင့် လူများစု ပြောကြား
လူ ၂၀၀ ခန့်ပါသော ဆန္ဒပြမှုတစ်ခု ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ န၀ဒေး ရုပ်ရှင်ရုံ အနီး ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း ပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ပျက်ပြားစေသော အနှောက်အယှက် လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး လက်မခံကြောင်း သတင်းစာဆရာကြီးများနှင့် လူအများစုက ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ “မြစ်ဆုံရေကာတာ ကိစ္စ တစ်နိုင်ငံလုံး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ ကို နားလည်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးဖို့ ပြောဆိုထားကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဆန္ဒစောတာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ တစ်ဆင့် ပြီးတစ်ဆင့် လူယဉ်ကျေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အချိန်ပေးသင့်တယ်။ ဒီလိုဟာကို အကြောင်းပြုပြီး အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို မလိုလားတဲ့သူတွေ က ဖျက်လိုဖျက်စီးလုပ်မယ့် အန္တရာယ်က ကြီးမားတယ်။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအနေနဲ့ စိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်”ဟု ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာ လူထုစိန်ဝင်း က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ဒဂုံမြို့သစ်ဘက်ကနေ ဘီအမ်ကားတွေငှားပြီး လာကြတာလို့ သိရတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက တားလို့ ဒီနားမှာတင်စုပြီး အခုလို သူတို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာလို့ သိရတယ်။ အခုတော့ တာဝန်ရှိသူတွေက လူစုခွဲဖို့ ပြောနေတာေ တွ့ရတယ်။ ပြောသံကြားတာကတော့ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာဖြစ်စဉ် နှစ်ပတ်လည်ဆုတောင်းကြဖို့ ထွက်လာကြတာလို့ သိရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ မဖြစ်လည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး”ဟု အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်မှာ နံပါတ်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့တောင် မြန်မာဟာ အာရပ်ကမ္ဘာလို မဖြစ်သင့်ဘူး၊ အဲဒီလိုလမ်းစဉ်မျိုး မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုး အခု ပြောကြားထားပြီးသားပါ။ အခုလို လမ်းစဉ်မျိုးကို မဖော်ဆောင်ဖို့ အဓိပ္ပာယ်လည်း သက်ရောက်သလို မဖော်ဆောင်သင့်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ အခုလည်း ကိုယ်လိုချင်တာကို လွှတ်တော်အထိ တင်ပြခွင့်ရလာတယ်။ ကိုယ့်အခက်အခဲ ကိုယ်တင်ပြခွင့်၊ ကိုယ်ပြန်တောင်းဆိုခွင့်အထိ ရနေတယ်။ ဆိုလိုတာက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ တောင်းဆိုခွင့်၊ မတရားတာကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရနေတဲ့ အနေအထားပါ။ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ဖို့ တာစူနေတဲ့ အချိန်၊ အရှိန်စရနေတဲ့ ကာလမျိုးမှာ ဒီလို လမ်းကြောင်းမျိုးကို ဖော်ဆောင်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။ အခုလို လူထုအုံကြွမှုကို ဦးတည်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကို ဖော်ဆောင်လို့ သက်ဆိုင်ရာ စစ်တပ်က တစ်ခါအာဏာပြန်သိမ်းပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြန်စောင့်ရတာမျိုး၊ လက်ရှိ တင်ပြခွင့်ရနေတဲ့ အနေအထားတွေကနေ ပိတ်သွားတာ မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ အခုလို ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့သူတွေက သမိုင်းရဲ့တရားခံ ဖြစ်သွားမှာပဲ။ အခုလို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဘက် ဦးတည်နေတဲ့အချိန် ဒါမျိုး ကြားရတာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးနဲ့များ လုပ်သလားလို့တောင် ထင်မိတယ်။ အခု အချိန်မှာ ကျွန်တော် မြင်တာကတော့ ကိုယ်လိုချင်တာကို အေးအေးချမ်းချမ်း တောင်းယူလို့ ရနေတဲ့ အနေအထား ရောက်စပြုနေပါပြီလို့ ပြောချင်ပါတယ်”
မကျေနပ်တာကို ..ဆန္ဒပြခွင့်ကတော့.. အချိန်မရွေးနေရာမရွေးရှိနိုင်ရမယ်ထင်ပါတယ်..။
ဒေါ်စုက.. ရေဒီယိုကနေပြီး.. ဒါမှမဟုတ်.. ကွင်းဆင်းပြီး.. ဆန္ဒမစောကြပါနဲ့..၃လစောင့်ကြည့်ပါ.. အိမ်ပြန်ကြပါလို့.. ပြောလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်..။
ထားဝယ်-ကန်ချနပူရီ ရထားလမ်းဖောက်ရန် စီစဉ်
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁- ဥရောပနှင့်အာရှချိတ်ဆက်မည့် ထရန်အေးရှားရထားလမ်းပိုင်းတွင် မဟာ ဗျူဟာကျလာမည့် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ကန်ချနပူရီကိုချိတ်ဆက်မည့် ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရန် စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက ပြည်တွင်းမီဒီယာ များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။
““ရထားလမ်းတစ်ခုကို ထပ်ပြီးစကားဆိုနေပါတယ်။ ဒီလမ်းကတော့ ခရီးသိပ်ပေါက်တယ်။ အောက် မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကနေ ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချနပူရီကို သွားမယ့်လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ မိုင် ၈၀လောက်ဖောက်ရမယ်။ ဒီရထားလမ်းဖောက်တဲ့အခါမှာလဲ မူဆယ်- ကျောက်ဖြူရထားလမ်းဖောက်သလို ပိုက်ဆံ တွေ မြန်မာပြည်မှာပဲ ကျန်ခဲ့အောင် လုပ် ရမယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ အလုပ်ရရှိ အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောင်တစ်ချိန်မှာတော့ စီးပွားရေး သိပ် ကောင်းလာမယ်လို့တွက်ပါတယ်””ဟု ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောသည်။
““လောလောဆယ်အနေနဲ့ ဒီ ကျောက်ဖြူ-မူဆယ် ရထားလမ်းပိုင်းကို တရုတ်နိုင်ငံက ပညာရှင်သုံးဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ တိုင်းတာမှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရထားလမ်းလိုပဲ ထားဝယ်ရေနက် ဆိပ် ကမ်းနဲ့ကန်ချနပူရီကို ချိတ်ဆက်မယ့် ရထား လမ်းကိုလဲ စကားဆိုနေပါပြီ။ မူဆယ် ကျောက်ဖြူရထားလမ်းကို ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာ လလောက်မှာ ဖောက်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ထင် ပါတယ်။ စတင်ဖောက်လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ ငါးနှစ်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရထားလမ်းဖောက်လုပ် ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာပြည် က ထွက်တဲ့ အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်တွေကို ရောင်းမယ်။ နိုင်ငံသားတွေကို အလုပ် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မယ်။ နောက်ဆုံးစက် မောင်းတွေကအစ အလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ကွက်တွေ အများကြီးပေါ်လာနိုင်တော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးကို ကျွန်တော်မဖြစ် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အခုဆို ရင် ဒီ Project ရဲ့ လားရှိုးနဲ့မူဆယ် Feasibility Study Report ပြီးသွားပြီ။ စာအုပ်လဲ ထွက်လာပြီ””ဟု ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးက ပြောသည်။
တိုင်းတာ ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်သည့် မူဆယ်-လာရှိုး ရထားလမ်းပိုင်းတွင် လမ်း အရှည် ၁၂၆ ဒသမ ၂၇၇ ကီလိုမီတာ (၇၈ ဒသမ ၉၂ မိုင်)ရှည်ပြီး တံတား ၄၁ စင်း၊ ရေပြန် ၁၂၃ ခု၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း ၃၆ ခု၊ ဘူတာ ခုနစ်ခု နှင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၆၀၀ ကုန်ကျ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
““ဒီရထားလမ်းပိုင်းတွေဟာ ဥ ရောပနဲ့ အာရှချိတ်ဆက်မယ့် ထရန်အေး ရှားလမ်းပိုင်း စင်ကာပူ-ကူမင်းရထားလမ်းမ ကြီး၏ တောင်မြောက်၊ အရှေ့အနောက် လမ်းမကြီးတွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ် လို့ မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါလာဖို့ရှိတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့တော့ ကျန်တာပေါ့။ မြန်မာလိုင်းချိတ်ဆက်ပြီးရင် မန္တလေး-မူဆယ် ရွှေလီလမ်းပိုင်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့အခါ မဲခေါင်ဒေသဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအိုစတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ပတ်မိသွားမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလမ်းပိုင်း (မြန်မာ-ထိုင်း)ကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်သင့်ပါ တယ်။ မြန်မာနဲ့ထိုင်းက ဒုတိယကမ္ဘာစစ် တုန်းက လမ်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ သံဖြူဇရပ်နဲ့ ကန်ချနပူရီလမ်းပိုင်းက ရှိပြီးသားပဲ။ ပြင်ဆင် လိုက်ရင် ပြီးသွားပြီ။ အမြန်ဆုံးလုပ်နိုင် လေ မြန်မာအတွက် အကျိုးမြန်မြန်ရှိလေ ပဲ””ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးက ပြောသည်။ smthan@yangonmedia.com
မင်္ဂလာ သတင်းလေးပါ အခုပဲ weekly website မှာ တင်ထားတာပါ
“ Breaking News: မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ခြင်းကို မိမိတို့အစိုးရလက်ထပ်တွင် ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက လွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ (သတင်းအသေးစိတ်ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။) ”
ဒီမနက် အသိတယောက်ကားအပ်ပြီးလို့ ကားအပ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောဖြစ်တယ်။ က.ည.နမှာ ၂၀၀ ကျပ်ပဲကျကြောင်း။ အဲဒီနောက် ကားကို ထုံးဘို ဘက်တွင် စစ်တပ်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းကားကွင်းဆိုလား။ အဲဒီမှာ မော်တော်ကားကို သွားရောက်အပ်နှံရပါကြောင်း။ အဲဒီ ကွင်းကြီးထဲမှာ ဂိတ်လေးခုလောက်ကို ဖြတ်ရကြောင်း ။ တဂိတ်ကို ၂၀၀၀ ကျပ်နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဖိုးများ အလီလီပေးရကြောင်း။ စုစုပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျပ်လောက် ကုန်ကြရြေ…ကာင်း။ တပ်ကြပ်၊ တပ်သားများ၏ အဆဲအဆိုကိုလည်း ကားအပ်သူပြည်သူများ ခံကြရကြောင်း။ မင်းတို့ ဖုန်းတွေပိတ်ထားလိုက်။ အကုန်လုံးသိမ်းပစ်လိုက်ရမလား။ စသည်ဖြင့် ပြုမူပြောဆိုကြကြောင်း။ (၃၊ ၄)ရက်လောက် ညအိပ်တန်းစီပြီး အပ်ရကြောင်း။ စားစရာဆိုင်များပင်မရှိ။ အခုမှ ဖွင့်ခွင့်ပေးသော စားသောက်ဆိုင်များဖွင့်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း။ တပ်မတော်သားများမှာ ကားအပ်ကိုလက်ခံသော်လည်း ကားမျိုးစုံဖြစ်သည့်အတွက် တချို့ကားများကို ခဲမခြစ်တတ်ကြောင်း။ က.ည.န က ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများလို မဟုတ်သည့်အတွက် နားလည်ပေးရကြောင်း။ ခဲမခြစ်တတ်သည့် အင်ဂျင်အတွက် သံပေတံပေါ်တွင် အုံနာဘွတ် စာအုပ်မှ စာလုံးအတိုင်းတစ်လုံးစီခဲခြစ်ကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ခဲခြစ်စာရွက်ပေါ်မှ စာလုံးများမှာ ဖြောင့်တန်း မနေပဲ ကွေ့ကောက်နေကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ယာဉ်အပ်သူမှ ဖြစ်ရဲ့လား။ ပြသနာတက်မည်စိုးသည့်အတွက် မေးရာ။ ကိစ္စမရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ဆိုတော့ က.ည.န လိုမဟုတ်တဲ့အတွက် အထက်မှ ပြန်မစစ်ကြောင်း။ အထက် စစ်ဗိုလ်မှ လည်း မင်းတို့ ခဲမခြစ်တတ်လည်း “အင်”သာ ထုဟု ပြောထားကြောင်း။ ယာဉ်အပ်လက်ခံရာတွင် ဘာမှ မသိပဲတာယာအမျိုးအစား၊ အော်ရယ်ဂျင်နယ် နတ်တိုင်ဟုတ်မဟုတ်မေးကြောင်း။ မေးသာမေးသည်။ ဘာမျှ မသိကြောင်း။ အချက် (၆၄)ချက်လောက်မေးကြောင်း။ တန်းစီသည့် အချိန်မြန်လိုလျှင် ကိုယ့်ကားမြန်မြန်အပ်ချင်လျှင် ၆ သောင်း ၊ ၇ သောင်းလောက် ဈေးပေါက်နေကြောင်း။ ငွေပေးနိုင်လျှင် ချက်ချင်း မိုက်နဲ့အော်လျှင် တန်းအပ်နိုင်ကြောင်း။ ၀န်ကြီးကတော့ ကားအပ်လျှင် ပိုက်ဆံတောင်းလျှင် တိုင်ကြားပါရန်ပြောကြောင်း။ ခက်သည်က က.ည.နမှ မတောင်းပဲ အအပ်လက်ခံသည့် တပ်မှ တောင်းနေကြောင်း။ http://www.shwemandalay.net/index.php?option=com_content&view=article&id=783:2011-09-30-03-59-49&catid=37:getaways&Itemid=154
weekly မှာ နောက်ထပ် ဆက်တင်ထားတဲ့ သတင်းလေးပါ
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက တွ့ဆုံခဲ့ကြပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အပါအ၀င် အကြောင်းအရာသုံးရပ်အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သ တင်းရရှိပါသည်။
ဆွေးနွေးမှုအပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ဖတ်ကြားခဲ့ရာ၌ ”ယနေ့ပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးမှုတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် စဉ်းစားဆောင်ရွက်နေသည့် ကိစ္စ၊ ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက် နှစ်ဖက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကိစ္စ၊ ဥပဒေပြင်ပတွင် လက်နက်ကိုင်ဆောင် ဆန့်ကျင်နေကြသူများကို ဥပဒေဘောင်အတွင်း လာရောက် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ကြရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့်ကိစ္စများနှင့် ပြည်တွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတို့ကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်”ဟူ၍ ပါရှိခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် သတင်းထောက် များက မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ရာ ရိုက် တာ သတင်းဌာနမှ ဦးအောင်လှ ထွန်းက ”လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ဦး ခင်အောင်မြင့်က ကမ္ဘောဒီးယား မှာ ပြောသွားပါတယ်။ အစ်မသာ ပါလီ မန်ထဲကို ၀င်လာခဲ့မယ်ရင် လက် ကမ်းကြိုဆိုမယ်လို့ ပြောသွားပါ တယ်။အစ်မ၀င်လာဖို့ကျတော့ကျွန် တော်တို့သိတာက technically က နည်းနည်း အဆင်မပြေဖြစ် နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အစိုးရဖက်က အဲ တာကို ၀င်ဖို့အဆင်ပြေအောင် လုပ် ပေးနိုင်မယ့်အနေအထားရှိပါသလား။ ဒါကတော့ ၀န်ကြီးကို မေးတဲ့ မေး ခွန်းပါ။ နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ အစ်မကိုမေးတဲ့မေးခွန်းပါ။ တကယ် လို့ အစိုးရဖက်ကသာ နည်းနည်း ပါးပါး ပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုရင် NLD ကို registration လုပ်ပြီးတော့လာ မယ့် Byelection မှာဝင်ဖို့ရှိပါသလား။အစ်မကိုယ်တိုင် ၀င်ဖို့ရောမှန်း ထားတာရှိပါသလား”ဟု မေးမြန်းခဲ့ ပါသည်။
ထိုမေးမြန်းချက်ကို ဦးအောင် ကြည်က” ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဦးစွာဖြေရမယ်ဆိုရင် ဥပဒေနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့ မှတ်ပုံတင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ NLD နဲ့အတူ လက်တွဲပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက် အမြဲတန်းကြိုဆိုလျက်ရှိပါ တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖြေကြားလို ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမူ ” NLD က တော့၊ ကျွန်မက NLD အတွက်၊ အားလုံးအတွက် ပြောပေး လို့မရဘူးလေ။ CEC ကို ပထမတင် ပြရဦးမှာ။ CEC ကိုတင်ပြပြီးမှ ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကရွေး ကောက်ပွဲကိုမူအရ ကျွန်မတို့ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ တစိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ လက်ခံပြီးသားပါ။ဒီလို ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပုံဝင်နည်း အခြေအနေ အခင်းအကျင်းအရ ဒါကိုပဲကျွန်မတို့ကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ဆန်ကေးရှင်ဘွန်း သတင်းစာမှ ဒေါက်တာဇော်သန်းက ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ခေတ္တရပ်နားလိုက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည့်အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဘောထားအား မေးမြန်းခဲ့ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ”ကျွန်မတို့ နားလည် သလောက်က ဒီမနက်ကနေပြီးတော့ လွှတ်တော်ကို သမ္မတကြီးဆီက သ၀ဏ်လွှာပို့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီသ၀ဏ်လွှာမှာဆိုရင် သမ္မတကြီးက ပြည်သူလူထုရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ၊ ကြောင့်ကြမှုတွေကို ထောက်ထားပြီးတော့ ဒီမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ ဒီလိုမှာကြား လိုက်တယ်လို့ ကျွန်မတို့ နားလည်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်မအမြင်မှာတော့ ပြည်သူရဲ့အသံကိုနားထောင်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ ကောင်းပါတယ်။ ဒီဟာဟာအစိုးရတိုင်း လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါ။ ပြည်သူရဲ့အသံကို နားထောင်ရမယ်။ ပြည်သူရဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေကို တကယ်ပဲ လေးလေးနက်နက် ထားပြီးတော့ ဖြေရှင်းပေးရမယ်။ အဲတာကြောင့် ကျွန်မဒါကို ကြိုဆိုပါတယ်”ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်များ ကိုယ်စား မေးခွန်းကို 24/7 ဂျာနယ်မှ ဦးသီဟစောက မေးမြန်းခဲ့ရာ ”လောလောဆယ် ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ သိချင်နေကြ၊ မျော်လင့်ကြတာရှိတယ်။ အခုပြောင်း နေတဲ့ Political Process ထဲမှာ အန်တီစုတို့နဲ့ NLD က ဘယ်လောက် အထိ Inclusive ဖြစ်ပြီလဲ။ ဘယ်လောက်အထိ တရားဝင်ရပြီလဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေလွတ်ဖို့ အလားအလာ ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ နောက်တစ်ခုကတော့ Ethnic Issue တွေမှာ တိုင်းရင်းသားကိစ္စတွေမှာ ဘယ်လောက်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပြေလဲမှု ရပြီလဲ။ အဲဒီကိစ္စတွေမှာ အန်တီစုနဲ့ NLD က ဘယ်လောက်အထိ ပါဝင်ခွင့် ရနေပြီလဲ။ အချိန်တန်ရင် ပြောမယ်ဆိုတာ အဲဒီအချိန်အတွက် အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခု အန်တီစုပြောလို့ရပြီလား”ဟု မေးမြန်းခဲ့ပါ သည်။
ထိုမေးမြန်းချက်ကို ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်မှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ရာ၌ ”ခုနတုန်းက ၀န်ကြီးဦးအောင်ကြည်ဖတ်သွားတဲ့ အထဲမှာလည်း ပါပြီးပါပြီ။ ဒီကိစ္စတွေကို ကျွန်မတို့ ဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့က ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ အထိပါဝင်နေသလဲဆိုတာ၊ ကျွန်မ တို့က ဒီဟာတွေမှာပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအထိ ကျွန်မတို့ ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီးတော့မှ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးဖြစ်မယ်။ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်မယ့်ကိစ္စတွေမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့က အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ပြီး လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
October အတွက် အသစ်လုပ်ပါတော့ ဗျို့ …